कसलाई बढी चिन्नुहुन्छ ?
प्रश्न धेरै गा¥हो छैन । उत्तर पनि धेरै सजिलो छैन ।
हाकाहाकी कसैले कसैलाई तपाईं कसलाई बढी चिन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न ग¥यो भने उत्तर दिन पहिलोचोटि जो पनि अलमलिन्छ ।
यदि मलाई कसैले सोध्यो भने म भनिदिन्छु कि म कसैलाई पनि चिन्दिनँ । मलाई थाहा छ– म आपैंmलाई पनि चिन्दिनँ । यसो भन्दा खुस्केछ नभन्ठान्नुहोला किनभने स्वयम् तपाईंले पनि आपूmलाई राम्ररी चिन्नुहुन्न ।
इमानदारीपूर्वक भन्दछु– म आप्mनो शरीरका सबै अङ्गप्रत्यङ्गहरूलाई जान्दिनँ, शरीरका २०६ वटा हाडहरूको नाम मलाई थाहा छैन, आप्mनै शरीरका विभिन्न भागमा उमे्रका रौंका नाम पनि थाहा छैन । सम्भवतः तपाईंलाई पनि थाहा नहोला ।
विद्वान्हरूले भन्ने गरेका छन्– आप्mनै प्रतिभालाई नचिनेर धेरै मानिस मर्दछन् । आपूmभित्रको प्रतिभालाई कहिलेकाहीं अरूले चिनाउनुपर्दछ । कतिपयले आपैंmले आप्mनो प्रतिभालाई चिनेर त्यसैअनुरूप कार्य गर्दा प्रसिद्धि प्राप्त गरेका उदाहरणहरू हाम्रै वरपर छन् ।
मेरो वरपर रहेका अधिकांश वनस्पतिलाई चिन्दछु तर नाम थाहा छैन । मैले गोठालो जाँदा र घाँस काट्न जाँदा आपैंmले काट्ने गरेका घाँसहरूको नाम मलाई थाहा हुँदैनथ्यो । मैले एकजना साथीलाई उसको घरका गमलामा रहेका पूmलहरूको बारेमा सोधें । उसले एक/दुई वटा पूmलको नाम नै बताउन सकेन । नाम बताउन सकेका पूmलहरूले वातावरणमा पार्ने प्रभावको बारेमा त झनै बताउनै सकेन । आँगनमा फुलेका पूmलहरूको वैज्ञानिक नाम त झन् थाहा थिएन ।
यदि आप्mनै सन्तानलाई राम्ररी चिन्न सकेको भए सबै अभिभावकका सन्तान पढाई वा उसको रुचिको अन्य क्षेत्रमा निकै राम्रो गर्न सक्थे । तर वास्तविकता हामीले देखिरहेका छौं । समाज कस्तो छ भन्ने कुरो कतै लुकेको छैन ।
एकजनालाई सोधें– तपाईं कुन ठाउँलाई बढी चिन्नुहुन्छ ? उसले आप्mनै गाउँको नाम बतायो । मैले अर्को प्रश्न थपें– तपाईंको गाउँ कहिले र कसरी बसेको हो तथा नामाकरण कसरी हुन पुगेको हो ? उत्तरमा शून्यता आयो । गाउँमा स्थापित विभिन्न देवदेवीको स्थापनाकाल र पूजा हुनुपर्ने कारण तथा चलनको विषयमा प्रश्न राखें । धेरै कुरा बुभ्mन बाँकी रहेको स्पष्ट ग¥यो । सोधें– तपाईंको गाउँमा रहेका जातिहरू कुन, कहाँबाट र कहिले तथा कुन परिस्थितिमा आए भन्ने विषयमा थाहा छ ? झन् यस विषयमा आपूmले केही पनि बताउन नसक्ने बताउँदै भन्छन्– मलाई वर्तमानका तथ्याङ्कहरू थाहा छ । मैले अर्को प्रश्न थपें– तपाईंका परिवारका सम्पूर्ण सदस्यका नाम (मलाई सबैको नाम थाहा छ)को नेपाली, हिन्दी, बज्जिका वा अङ्ग्रेजी कुनै एक भाषामा अर्थ बताइदिनुहोस् । नामहरू सम्भँmदै असमर्थता प्रकट गर्दछन् ।
संसारमा जान्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । बुभ्mनुपर्ने कुरा झन् बढी छन् । चिन्नुपर्ने कुराको संसार कति विशाल छ, जो कल्पनाभन्दा पनि विशाल छ । हामीले ज्ञानको कुनै एक क्षेत्रलाई पनि निकै कम चिन्दछौं । धेरै कुरा चिन्न बाँकी नै रहन्छन् । यसै कारण कुनै
विद्वान्को ज्ञानको क्षेत्र निकै
साँघुरो हुन्छ । यहाँ साँघुरोमा विशालता हुन्छ भन्न खोजिएको हो । कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर गरेपछि
त्यसको एक छेउमा पिएचडी
गर्दछन् र पिएचडीको पनि एउटा कुनाको विषयमा उसले डि.लिट्. गर्न पाउँछ । डि.लिट्. गर्नेको संसारमा आप्mनो क्षेत्र वा विषयको विशिष्ट नागरिकमा गणना हुन्छ ।
आचार्य चाणक्य भन्दछन्– पहिचान सबैको हुन्छ । साधारण पहिचानबाट विशिष्टतिर जानुपर्छ । विशिष्टता भनेको गहिराई हो । मेडिकल विषयमा कसैले डि.लिट्. गर्दछन् भने उनले उपचार गर्ने रोग चाहिं कुनै एउटा रोगको सानो अंश होला तर अहेब गरेकाले तत्काल सबै रोगको औषधि दिन सक्छन् । आचार्य चाणक्यले भनेको पहिचान चाहिं लाखौंको भीडमा कसैलाई कसैले किन चिन्नुपर्दछ भन्ने हो । उसलाई कसैले किन चिन्नुपर्दछ भन्ने कुरो उसैले निर्धारण गर्ने हो । यसका लागि उसले आपूmलाई चिन्नुपर्दछ । फेरि प्रश्न उठ्छ कि कोही कसैले आपैंmलाई चिनेको हुँदैन र ? वा आपैंmलाई पनि नचिन्ने कोही हुन्छ त ?
चिन्ने प्रमाण के ? चिन्दछु भन्ने आधार के ?
केही सूत्रहरू माथि नै आइसकेका छन् ।
चिन्नुपर्ने कारण हुन्छ । आपैंm दा¥ही सफाचट्ट पार्नेले आप्mनो गालालाई हर समय चिल्लो र आकर्षक पारिरहने सबै सामग्रीको नाउँ थाहा हुन्छ । तिनीहरू केबाट बनेका हुन् र कहाँबाट आउँछन् भन्ने विषयमा अलिअलि जानकारी राख्छन् । तिनका नकारात्मक
प्रभावहरू के के हुन् भन्दा चुप लाग्छन् । र, जो सैलुनमा दा¥ही काट्छन्, उसलाई यी प्रश्नहरू नै बेकार लाग्छन् । चिल्लो गाला परिचय बनाउन चाहने तर चिल्लोपनबारे जानकारी नराख्ने हामी धेरै छौं ।
अर्को यथार्थ हो, कोही कतै घमण्ड नगरे हुन्छ कि ऊ निकै जान्ने छ । कोही कुन क्षेत्रको जानकार छ भने सोही क्षेत्रको ऊभन्दा बढी जानकार अरू पनि छन् भन्ने कुरो उसले बुझेको हुन्छ । अझ कतिपयका आफन्तले प्रशंसाका पुल यसरी बाँध्दछन् कि उही संसारमा सबैभन्दा जान्ने छ । आफन्तको प्रतिभामा गर्व गर्नु स्वाभाविक हो तर जो प्रतिभावान् छ, उसले चाहिं आप्mनै क्षेत्रमा आपूmलाई कति चिनेको छ र अझ कति चिन्न बाँकी छ भन्नेतर्पm पनि विचार गर्नुपर्ने हो । यतातिर ध्यान दिने चाहिं प्रगतिको उकालोमा चढिरहेको हुन्छ र आपैंmलाई निरन्तर जान्ने भनेर आपूmले चिनेको क्षेत्रमैं सन्तोष गर्नेले चाहिं आपूmभन्दा अरू कोही अगाडि बढिरहेको पाउँछ । अर्थात् आप्mनो परिचय साँघुरिएको बुभ्mने र नबुभ्mने दुवैथरी पहिचानको लागि सङ्घर्षरत हुन्छन् ।
कोही के गर्दैछ र के हो भन्ने कुरो आपैंmमा महŒवपूर्ण छ । यस अर्थमा हरेक व्यक्ति विशिष्ट छ । हरेक व्यक्तिको विशिष्टता भनेकै उसको पहिचानसँग सम्बन्धित छ । हरेकले यसैलाई चिन्नुपर्दछ । यसलाई चिनेपछि उसलाई अरूले चिन्न थाल्दछ । पहिचान कायम हुनु भनेको यही नै हो ।
अब चिन्ने कुरो कसैले गर्दा म झस्किन्छु । मलाई लाग्छ, मैले आपैंmलाई चिनेको छैन । कोही कसरी दाबी गर्न सक्दछ कि म फलानोलाई राम्ररी चिन्दछु ।
चिन्नेसित सङ्गत हुन्छ । आजभोलि धेरैका पाँच हजार साथी फेसबूकमा हुन्छन् । सङ्गत र साथीको अर्थ यहाँनेर बुभ्mन मलाई अप्ठ्यारो हुन थाल्छ । मैले सङ्गत गरेको जति सबैलाई म चिन्दछु भनेर दाबी गर्दिनँ किनभने मैले माथि नै स्वीकार गरेको छु, म आपैंmलाई चिन्दिनँ । मलाई आप्mनै वातावरण र वनस्पतिको बारेमा धेरै थाहा छैन ।
कहिलेकाहीं प्रश्न उठ्छ मनमा– जब म आपैंmलाई चिन्नमा यति कमजोर छु भने के म संसारकै कमजोर छु त ? यसरी भएपनि त ठीक हुन्थ्यो किनभने मेरो नाम गिनिज बूकमा आइसक्थ्यो तर यसो हुन सकेको छैन । सबैभन्दा जान्ने दाबी त गर्नै सक्दिनँ किनभने मलाई मेरै विषयमा थाहा छैन । के उसो भए मभन्दा पनि नजान्नेहरू छन् ? आपैंmले आपैंmलाई चिन्न नसक्नेले यस प्रकारको विषयमा सोच्नु मलाई बेकार लाग्न थालेको छ ।
वर्षौं सँगै बिताएका तर पछि कुनै कारणले छुट्टिएकाहरू पछुताउने गर्दछन्– मैले उसलाई समयमा चिन्न सकिनँ ।
कसैको उद्गार हुन्छ– यतिका दिनपछि बल्ल म उसलाई चिन्दैछु ।
कोही भन्छन्– म उसको फलानो पक्षलाई मात्र चिन्दछु, त्यो पनि यी यी शर्त वा सीमाहरूभित्र रहेर ।
समग्रमा चिन्नु चानचुने कुरो होइन रहेछ ।
मेरो नेपाली व्याकरण त्यसै कमजोर भएको होइन । नेपालमा स्वर्ग नै पु¥याउने ठाउँको रूपमा स्वर्गद्वारी भन्ने ठाउँलाई मानिएको छ । स्वर्गद्वारी भन्ने शब्द स्त्रीलिङ्गी हो भन्ने कुरो त्यतिखेर थाहा पाएँ, जतिखेर जनकपुरको गङ्गासागरको एउटा किनारको पल्लोपट्टि स्वर्गद्वार लेखिएको पाएँ । म अचम्ममा परें, स्वर्गद्वार र स्वर्गद्वारी दुवैको अर्थ सम्झेर ।
धेरैलाई जानकारी नहोला, जनकपुरमा स्वर्गद्वार छ भनेर । जनकपुरको स्वर्गद्वार जनकपुरकै लागि नयाँ हो रे । त्यहीं आसपासका एकजना मित्रले जनकपुर बसाइँको क्रममा कमसेकम एकचोटि हेर्न सकिने ठाउँको रूपमा मलाई टिपाएका थिए– भूतनाथ मन्दिर । भूतनाथ मन्दिर प्रवेश गर्न स्वर्गद्वार भएर जानुपर्ने । स्वगद्वारले भूतनाथको दर्शन गराउने । बडो गज्जबको वा अनौठो लागेको थियो ।
बिहीवार बिहान ३ बजेर २४ मिनेटमा ढोका ढकढकाउँछ कसैले । जनकपुरको पुरानोमध्ये स्तरीय मानिने होटल वेलकमको कोठा नम्बर ११० मा वास्तवमा मस्त निद्रामा छौं, सञ्जयकुमार मिश्र र म । ढोका एकोहोरो ढकढकिइरहेछ । को हो, किन हो केही बोल्दैन । माथि झुन्डिएर आप्mनै गतिमा घुमिरहेको पङ्खाको आवाजले पनि ढोकाको ढकढकाहटलाई छेक्न सकिरहेको छैन । निद्राले पनि ढकढकाहटलाई छोप्ने असफल प्रयास गरिरहेको छ । सिरानीतिर राखिएको सानो टेबलमा रहेको मोबाइलको स्क्रिनले आप्mनो अनुहारलाई उज्यालो बनाउँदै नाम र नम्बर देखाउँछ– कृष्ण तिवारी पत्रकार ।
मङ्गलवार (१२ चैत २०७५) म र तिवारी यसै कोठामा सुतेका थियौं । सम्भवतः उनी रौतहटका सर्वोत्कृष्ट घुराहा हुन् । कुनै दिन यस प्रकारको प्रतियोगिता भयो भने मलाई लाग्छ उनी कैयौं जिल्लाका घुराहाहरूलाई उछिनेर जिल्लाको नाम उँचो पार्छन् । उनी निदाउन नपाउँदै सक्रिय भइहाल्ने रहेछन् । यसले गर्दा पहिले त हाँसो उठ्छ र त्यसपछि रिस । किनभने शुरू भनेको त शुरू न हो, कुनै पनि कुरो शुरू भएपछि बढ्दै जान्छ । बिस्तारै तिवारीजीको ङ्यार्रङुर्र यति धेरै बढ्छ कि त्यहाँ निद्रादेवीको दर्शन असम्भव । आँखा चिम्लेर जति धेरै निद्रादेवीको ध्यान गरे पनि नहुने, नसकिने । निदाउने बेलामा आँखा बन्द गरेजस्तै कान पनि बन्द हुने अवस्था भए कति राम्रो हुन्थ्यो । निदाउने बेलामा कान बन्द गर्नुपर्छ भनेर ब्रह्माले बनाउन बिर्सेकोमा मलाई यही रात हो चित्त दुखाइ भएको । साँच्ची रात अनिदो बित्यो । मलाई एक रात अनिदोले दैनिकीमा खासै प्रभाव पार्दैन यदि अन्य अस्वस्थता छैन भने । मलाई सम्झना छ, एउटा कामविशेषले लगातार तीन रात आँखा चिम्मसम्म पनि गर्न पाएको थिइनँ, दिउँसो सुत्न पाउने अवस्थै थिएन ।
त्यस रात मिश्रजीका साथी थिए– यादवराज पुरी । पुरीजी पनि उत्तम घुराहा रे । उनको घुर्राहटको अनुभूति लिन नपाएकोमा अहिले पछुतो लागिरहेको छ । मैले सबैभन्दा ठूला घुराहा शीतल गिरी दाजुलाई मान्दथें तर तिवारीको अगाडि दाजुको अस्तित्व अजङ्गको सिमलको रूखको काखमा अम्बाको बोटजस्तो । मेरा साथीहरू प्रेमलाल साह, अनीलकुमार निधि र देवेन्द्र साह पनि घुर्छन् । सबैका घुर्राहटका आआप्mनै विशेषता छन् । पुरीको घुराइले मिश्रलाई अप्ठ्यारो लागेकोमा पुरीजीलाई पनि त्यति राम्रो लागेनछ । हामीबीच एकार्काको घुराइको चर्चा चल्छ । अन्य कुराहरू विचार गरेर हामी चारैजना रौतहटेलीबीच सल्लाह हुन्छ– तिवारीलाई पुरीको कोठामा एक रातको बसाइ सार्ने र मिश्रजी मित्रजीको कोठामा सुत्ने ।
मिश्रले कुराकानी गर्न खोज्दाखोेज्दै ११ बजे मित्र निदाउँछन् । दुवैजनाको कुराकानीको विषय हाम्रो धर्म, संस्कृति र वर्तमान समाज हुन्छ । उता तिवारी र पुरी चाहिं साढे बा¥ह बजेसम्म दुःख–सुख साट्छन् । त्यसपछि बल्ल सुत्ने प्रयत्न गर्दछन् । अब हुने भयो दुई घुराहाको परीक्षा । वास्तविक घुराहा को ? तिवारीजीको आँखामा निद्रादेवीको प्रवेश हुन नपाउँदै र मुखको आवाज लर्बरिन नपाउँदै नाकको घुर्राहट सक्रिय हुन्छ । तिवारीजीको सक्रियताभन्दा उनको निद्राको घुराइको सक्रियता निकै बढी छ । पुरीजीको निद्रालाई सजिलै लखेट्ने क्षमता तिवारीमा देखिन्छ । तिवारीजीको मुखको आवाजभन्दा कैयौं गुणा ठूलो नाकको आवाज हुन्छ । उनी जागृत अवस्थामा जति जोडले कराउन सक्दैनन्, उति कडा स्वरमा निदाएपछि कराउँछन् । उनको मुखले नाकलाई सक्रिय बनाउँदैन तर नाकले भने मुखलाई पनि सक्रिय बनाउँछ अर्थात् तिवारीजीको निद्रा गहिरिंदै जाँदा नाक र मुख दुवैबाट आवाज निकाल्न सक्छन् । मजस्तोलाई उनको अगाडि निद्रा नआउने शतप्रतिशत ग्यारेन्टी नै हो । शायद जति प्रयास गर्दा पनि पुरीजीको छेउमा निद्रादेवी परिनन् । भनेको सुनेको– कोल्टो फेर्न लगाउने, सिरक ओढ्न लगाउने, गाली गर्ने, बोतलको पानी छ्याप्ने, खाटबाट भुइँमा सुत्न लगाउनेलगायतका जति यत्न गरे पनि पुरीजीले नसकेपछि अन्ततः सवा तीन बजे अर्कै कोठामा जाऊ भनेर पठाएछन् ।
स्क्रिनमा तिवारीजी देखिन्छन् तर उठ्न मन लाग्दैन । ढोका एकै मिनटको लागि ढकढकिन बन्द हुन्छ । म निदाउन पुग्छु र फेरि ढकढकिन्छ । मिश्रजी मलाई सोध्छन्– के गरूँ, ढोका खोलूँ ?
कोही बोल्दैन, आवाज नचिनी ढोका खोलौं । होटलको कुरो हो ।
तिवारीको फोन थियो अघि, हैन...।
हो, तर फोन थियो भन्नेबित्तिकै उनैले ढोका ढकढकाएका हुन् भन्ने अर्थ लाग्दैन ।
उसो भए आवाज नचिनेसम्म जसले पनि ढकढकाउँदा पनि ढोका नउघार्ने बरु होटलको रिसेप्सनमा जानकारी गराउने ।
हाम्रो सल्लाह हुँदै थियो, तिवारीले अलि लाज मानेकै स्वरमा आप्mनो नामोच्चारण गर्दै ढोका खोल्न आग्रह गर्दछन् । मिश्रजीले ढोका खोल्दा ३ बजेर २७ मिनेट भइसकेको मोबाइलको घडीले देखाउँछ ।
अब कथाले मागे अनुसार सुत्ने वातावरण बिथोलिन्छ । एकल ओछ्यान हुने दुई खाट छन्, जोड्न मिल्दै नमिल्ने । किन यति रातमा आएको भनेर प्रश्न गर्दा आएको उत्तरले हामी सबैजनामा हाँसो उठ्छ, जसले निद्रालाई लखेट्छ । हामी चार घण्टा सुतेका छौं, यतिले पुग्छ ।
यतिबेला सामान्यरूपमा कुनै कोठाको जुन वातावरण हुनुपर्ने हो, त्यसअनुरूप छँदैछैन । जिस्क्याउने र जिस्किने गर्दै मर्निङ वाकको समय बन्दछ । अति सामान्य नित्यकर्म सिध्याएर पौने पाँच बजे निस्कन्छौं रेलवे स्टेशनतिर । सडक अँध्यारै छ । फाट्टफुट्ट मान्छे देखिन्छन्, दिनभरि व्यस्त रहने सडकमा । आधुनिक तरीकाले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जनकपुर रेलवे स्टेशनमा करीब आधा घण्टा बिताएपछि भूतनाथ मन्दिर पुग्नुपर्नेछ । जनकपुरमा जानकी मन्दिर, राम मन्दिर र अन्य मन्दिरहरू आप्mनै विशिष्टता र विशेषताले प्रसिद्ध छन् । भूतनाथ मन्दिरको नाम सुनेको दुई महीना पनि भएको छैन र अहिले जाने मौका मिलेको छ ।
रेलवे स्टेशनदेखि भूतनाथ मन्दिरसम्मको पैदल यात्रा करीब पन्ध्र मिनेटको मात्र छ । भूतनाथ मन्दिरको मूल प्रवेशद्वारमा लेखिएको छ– स्वर्गद्वार । भित्र छिर्दछौं । वातावरण निकै राम्रो छ । अनेक पुष्पहरूले मुस्कुराएर स्वागत गर्दछन् । वसन्तमा पुष्प पुष्पित हुनु स्वाभाविक हो तर जहाँ जीवनको समाप्तिपछि भौतिक देहलाई खरानी बनाउने ठाउँमा अनेक पुष्पहरूले मुस्कुराएर स्वागत गर्दछ, अनौठोपनको अनुभूति अस्वाभाविक होइन । भूतनाथ भनेकै शिव हुन् । मन्दिर पनि शिवकै हो । मन्दिरभन्दा थोरै दक्षिणतिर कुनामा शिव–पार्वतीको विशाल मूर्ति छ, खुल्ला आकाशमा । स्वर्गद्वार दुईवटा छन् । पूर्वको द्वारले मन्दिरको अगाडि पु¥याउँछ, जहाँको दृश्य रमणीय छ । त्यहीं भएर बिहानी भ्रमणमा निस्केकाहरू मन्दिरभित्र प्रवेश गरी शान्तिको अनुभूति गरिरहेका छन् । मन्दिरभन्दा पश्चिमतिर श्मशान छ, जहाँ मृतदेह खरानी बन्दछ । मानव शरीर पञ्चभूतमा विलीन हुन्छ ।
स्वर्गद्वारबाट भित्र छिरेपछि पुग्नुपर्ने हो स्वर्गमा । हामी त्यहाँबाट निस्केर चर्चा गर्दछौं– स्वर्गबाट कोही आजसम्म फर्केको छ ?
जेहोस् जनकपुरले केही गरेको छ । धेरै गर्दैछ । गर्नुपर्ने त जहाँ पनि बाँकी हुन्छ नै ।
तिवारीजीको दुई रात र दुई कोठा तथा तीनजनासित सुताइको चर्चा पनि हाम्रो यात्राको रमाइलो पक्ष बनिरहन्छ ।
बढ्दै छ होलीमा महिलाको भूमिका
पहिले होलीको नाम सुन्नासाथ बालबालिकाको मनमा उत्साह आउँथ्यो । नवयुवाहरूमा रमाइलो गर्न पाउने भनेर उत्साहको ठेगानै हुँदैनथ्यो । अहिले अवस्था बदलिएको छ ।
धेरै घरपरिवार यस्ता थिए, जहाँ वर्षमा एक दिन होली र अर्को दिन दीपावलीको भोलिपल्ट मासु पाक्दथ्यो । मलाई राम्ररी सम्झना छ, मेरो गाउँमा, म बालक छँदा, एकचोटि जेठमा पनि एउटा खसी ढालिन्थ्यो । मासु किन्नेहरूले एक पाउ र आधा पाउ मात्र मासु किन्दथे । मासुमा आलु मिसाएर पकाइन्थ्यो । अलि धनीमानीहरूले जाडोमा एकचोटि परेवा पनि किनेर खान्थे । कतिपय परिवारमा असोजको दशैं, मङ्सिरको विवाहपञ्चमी, माघको तिलासङ्क्रान्ति, फगुआ, चैते नवमी, वैशाखको सतुआन र जूडशीतल, जेठको दशहरालगायतका पर्वको समयमा आपूmले भाकल गरेको देवीदेवताको मन्दिरमा परेवा वा खसी चढाउँथे र मासु खान्थे । मासु खानु निकै दुर्लभ मानिन्थ्यो । बरु असार, साउन, भदौ, असोज र कात्तिकसम्म माछामासु खाने परिवारमा माछा नपुगेको हप्ता हुँदैनथ्यो । कतिपयले चाहिं दिनदिनै माछा खान्थे किनभने खेत, खोला, पैनी सबैतिर माछा पर्याप्त पाइन्थ्यो ।
अहिले आर्थिक हैसियतमा जति वृद्धि भएको छ, त्योभन्दा बढी खानपानतिर मनोवृत्ति गएको छ । आजको होलीमा आर्थिक हैसियत नभए पनि खान पिउनकै लागि होली हो भन्ने भ्रमको विकास भएको छ । होली त खान र पिउनको लागि होइन भन्न सकिन्न तर साढे तीन दशकपहिले धेरै मानिस यस कारण रोगी हुन्थे कि पर्याप्त भोजन पाइँदैनथ्यो र अहिले यस कारण रोगीको सङ्ख्या बढेको छ कि भोजनमाथि नियन्त्रण छैन । जथाभावी भोजनले मानिस होलीको भोलिपल्ट त्यतिबेला पनि बिरामी परेका यदाकदा सुनिन्थ्यो तर आजभोलि भने होलीको भोलिपल्ट बिरामी हुनेको सङ्ख्या अति नै बढेको छ । होलीले आप्mनो विस्तार कसरी गरेको छ, त्यो त सबैले बुझेका छन् तर होलीमा हामी कसरी विस्तारित भएका छौं, यो कुरो हामीले नै विचार गर्नुपर्ने हो । तीस वर्षपहिलेको जमाना त होइन यो तर अहिले मानिसले आप्mनो स्वास्थ्यको बारेमा धेरै जानकारी राख्न थालेको छ, सचेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । तर पनि बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै जानुले लापर्बाही देखाउँछ कि ?
पहिले सबैभन्दा बढी होली भनेपछि महिलाले डर मान्नुपथ्र्यो । महिलाले डर मान्नुपर्ने कारण थियो कि गाउँटोलका नन्द तथा देवरहरूसँग होली खेल्ने कुनै ठेगानै हुन्थेन । साथै अरू दिनको तुलनामा कामको चाप कम्तीमा दोब्बर बढ्थ्यो । होलीको दिन जुन बेला मन लाग्यो नन्द र देवरहरू त्यही बेला आउने र भाउजूलाई रङ हालेर नुहाइदिने र अबिरले जीउ हरियो रातो बनाइदिने । यसले गर्दा महिलाहरू हैरान तथा परेशान भइरहन्थे । जसले जतिखेर जे पकाउन भन्यो त्यही पकाउनुपर्ने तथा जसले जतिखेर जे खानलाई माग्यो उतिखेर उही दिनुपर्ने महिलाको नियति । आपूmले खानुपर्ने कुनै ठेगान नै हुँदैनथ्यो । महिलाहरूले बढी परेशानी हुनुपर्ने अर्को पनि कारण थियो– होलीका लागि सबै मरमसाला महिलाले सोही दिन तयार पार्नुपर्ने र चुलोको आगो बाल्न समस्या भइरहन्थ्यो । चुलोको आगोले भाँडोलाई बढी कालो बनाउने हुनाले अझ समस्या थपिन्थ्यो ।
दिन सधैं आउँछ । हरेक सूर्याेदय केही फरक भएर आउँछ । हरेक वर्ष होली पनि आउँछ, हरेक वर्ष होलीको रङ केही परिवर्तन भएर आउँछ । होलीलाई विगत तीन दशकको आँखाले हेर्ने हो भने परिवर्तनका एक/एक दृश्य आँखाअगाडि साक्ष्य भएर आउँछन् ।
अहिले होलीमा महिलाले तुलनात्मकरूपमा धेरै सरल युगको उपभोग गरिरहेका छन् । महिलाको होली दैनिकीमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ । सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । सकारात्मक परिवर्तनतिर उन्मुख रहेको छ । होलीको परिकार पकाउने काममा वृद्धि भएको छ तर धुँवा र आगो फुक्नुपर्ने कामबाट धेरै महिला दुःखी छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ अभैm पनि दाउराले भान्छालाई सुशोभित तुल्याउँछ ।
पहिले महिलाहरू होलीको दिन समूह बनाउन पाउँदैनथे । अहिले परिवर्तित युगमा महिलाले होलीको दिन होली खेल्न थालेका छन् । होलीको समयलाई होलीकै रूपमा उपयोग गर्ने समय केही निकाल्न सफल भइरहेका छन् । होलीको दिन पुरुषको भूमिकामा आप्mनै किसिमको परिवर्तन भएजस्तै महिलाले आप्mनो घरको सबै काम सिध्याएर टोलछिमेकसम्म होली खेल्न पुगिरहेका छन् । समूहमा होली खेल्ने महिलाहरूको समूह नै निस्कन थालेको देखिन्छ ।
मधेसका हरेक संस्कृति महिलामाथि निर्भर छ । महिलाले भाग नलिए कुनै पनि संस्कृति मनाउन उति सहज वा सम्भव छैन । सबै संस्कृतिमा प्रत्यक्षतः वा अप्रत्यक्षतः महिलाको भूमिका रहेको छ । मधेसी लोकसंस्कृति त अझ महिलाप्रधान नै रहेको छ । महिलाको भूमिका बढेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व बढेको, शैक्षिक तथा आर्थिक योगदानमा जिम्मेवारी बढेको सबैले देखेकै छन् । साथै महिलाको भूमिका चाडपर्वमा पनि बढेको छ । चाडपर्वमा महिलाको भूमिका बढ्नुले होली केही सकारात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ । होलीको समयमा समूहमा महिलाले विकृतिरहित किसिमले होली खेल्न थालेका छन् । होलीलाई आप्mनो बनाउन थालेका छन् ।
तर कतैकतै मदिरापान गरेको पनि सुनिन थालिएको छ महिलाले पनि । महिलाले होलीको समयमा मदिरापान गरेर होलीलाई झन् विकृतिमय बनाउने देखिन्छ । यस किसिमको प्रवृत्तिमा कमी आओस् ।
होलीलाई अझ सुगम र सुखमय बनाउन र सबै किसिमका विकृतिलाई हटाउन महिलाको भूमिका अझ बढेको छ । महिलाको जिम्मेवारीमा अझ वृद्धि भएको छ ।
तितरबितर यात्राको नमज्जा
नियोजित यात्रामा अवरोध केवल बाटोको मात्र हुँदैन, उत्साहको अमिलोपन पनि हुन्छ । उत्साहलाई अमिलो भएको हेर्न सम्भवतः कसैलाई मन पर्दैन । अझ कम्तीमा एक वर्ष पहिलेदेखिको यात्रा गर्ने उत्साह आधाभन्दा बढी लामो बाटो नाघेपछि अमिलो बन्दछ भने मनोविज्ञान कस्तो होला ?
निजगढबाटै छतिवनसम्म मज्जाले बाइक जान्छ भन्ने सुनेदेखि एकचोटि त पुग्नैपर्छ भन्ने लालसा आजदेखिको होइन । गरुडाबाट छतिवन पुग्न निक्कै टाढा छ । गरुडाबाट हेटौंडा हुँदै छतिवन पुग्दा करीब एक सय तेइस किलोमिटर लामो यात्रा हुन्छ तर गरुडाबाट निजगढ भएर बकैया खोला हुँदै छतिवन जाँदा करीब पैसट्ठी किलोमिटर मात्र हुन्छ रे । बकैयाको प्रवाह निजगढमा न बराबर हुन्छ । फागुनमा निजगढको बकैया पुलमुनि खासै पानी देखिंदैन । अथाह बालुवाको राशिमा पानीले अनुहार लुकाएको देखेर त्यो बाटो भएर हिंड्नेले यो खोलाले आपैंmले आप्mनो तिर्खा मेटाएको पनि बुभ्mछन् । मूल बाटोभन्दा उत्तरतिर हेर्दै जाँदा जब द्रुतमार्ग आउँछ, तब सबैको मनमा एउटा जिज्ञासा जाग्दछ कि यो बाटोको वर्तमान अवस्था कस्तो होला ?
मेरा उत्सुकता र जिज्ञासा खप्टिएका छन् । र, आज धेरै कालपछि समाधान गर्ने अवसर जुटेको छ । संयोग मिलाएको छ, झरना साहित्य परिवारले । झसाप यस्तो संस्था हो, जसले देशमा छतिवनलाई चिनायो र मैले झसाप कलिलो बिरुवा हुँदा सकेको मलजल गरेको हुँ । यस कारण झसापले गरेको कार्यक्रमप्रति मेरो अन्तर्हृदयदेखि आकर्षण हुन्छ । यही चुम्बकीय आकर्षणले मलाई तानेको हो । यसपालि निजगढबाट सोभैm उत्तरतिर हानिने तैयारी गरेर नै आएको छु । यसपालि सारथि छन्, श्रीकृष्ण । नाम त उनको किशुनदयाल यादव हो तर उपनामको खोजीमा विश्वप्रसिद्ध व्यक्तित्व बज्जिका रामायणका लेखक प्रा. डा. (डि. लिट.) अवधेश्वर अरुणकहाँ पुग्दा नामको पछाडि श्रीकृष्ण थप्न सुझाव दिएका थिए । उनै श्रीकृष्णलाई गत दुई वर्षदेखि छतिवनको कार्यक्रममा पु¥याउने चाहना छ र उनी पनि उत्तिकै उत्सुक छन् । आज संयोग परेको छ, झसाप २५ वर्षको भएको छ । चौथाइ शताब्दी पूरा गरेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा पुग्न हाम्रो तयारी अलिक पुरानै हो र हामी निर्धारित समयमैं गरुडा छाड्छौं ।
तामागढी गेटमा एउटा छाप्रे होटलमा सामान्य खाजा खाँदै गर्दा छतिवन हिंडेको टोलीका विभिन्न सदस्यसित मोबाइलमा उत्साहबद्र्धक कुराकानी हुन्छ । सबैलाई खबर पुगिसकेको छ, बकैयाको बाटो भएर हामी पुग्दैछौं ।
सडकटोल भएर जाँदा द्रुतमार्गमा पुग्न सजिलो हुन्छ तथा जान पनि सकिन्छ ।
धेरै ठाउँमा जान सजिलो नभएको बताउँछन् ।
खोलाको बाटो भएर जाँदा सजिलै पुग्न सकिन्छ । समय कम लाग्छ । अझ दुवैतिरको प्राकृतिक वातावरणको आनन्द लिंदै यात्रालाई पूरा गर्छौं । उत्साहका अनेक लड्डुहरू फुटिरहेका छन् । यात्रा अविरल बग्नुपर्ने हो । बाटो देखेको भए त खोलाको पानीको प्रवाहजस्तो बग्न सजिलो हुन्छ । सडकले आपैंm घुमाउँदै लैजान्छ तर खोलाको सतहले गहिराइलाई बताएको हुँदैन । खोलाको सतह त माथि जतिसम्म परेको हुन्छ, गहिराइलाई लुकाएको पनि हुन्छ । चुरेको विस्तारलाई नेपाली सेनाको एउटा टोलीले सम्याएर द्रुतमार्ग बनाउँदै गरेको भागमा पुग्दा हामीले नयनभरि नअटाउने अदृश्य दृश्यहरू हे¥यौं, अनुभूति ग¥यौं ।
अब खोलैखोलाको बाटो शुरु हुन्छ ।
पहिलो जँघार आइपुगेको छ । हेर्दै उत्साहमा ठेस लाग्छ । बाइक आधा डुब्ने गरी बडो मुस्किलले श्रीकृष्णले आप्mनो वाहनलाई जँघारबाट निकाल्छन् । छङछङ बगिरहेको पानी भएर बाइक अगाडि बढ्छ, अगाडि एउटा टिपरमा ढुङ्गा लोड हुँदैछ । त्यसैका एकजनाले भन्छन्– अगाडि कम्मरभन्दा माथि र छातिसम्म आउने जँघार पनि छ । पानी परेकोले पानी बढेको छ ।
उत्साहको पारो एकैचोटि तल झर्छ । मै भन्छु– अब यात्रा असम्भव छ ।
फर्किन मनले कहाँ मान्दछ । मस्तिष्क र हृदयमा यही त फरक छ । साक्ष्यले नजान र हृदयले जान पाए हुन्थ्यो भनिरहेको अवस्थामा हृदयको सुन्नुभन्दा बहिरो बन्नु उचित लाग्छ । उत्साह भरिएको मनभरि अमिलो भरिन्छ । छतिवन पहिले पनि दर्जनौंपटक पुगेको छु तर नयाँ बाटोको बारेमा सुनेको वर्षौंपछि साकार हुने अवस्थामा पुग्दा पानीले बाटो छेकेपछि कसरी जानु ? यात्राको नमज्जा भोग्नुपर्दाको यथार्थ भोग्नेले सजिलै बुभ्mन सक्छन् हाम्रो पीडा ।
आज पनि शनिवार हो । एक हप्ता मात्र भएको छ यो अमिलो यात्राको । यात्राको असफलताले गलित, भोकले छटपटिएका हामी बङ्कुलमा खाना खान्छौं । अहिलेसम्म फेसबूक, म्यासेन्जर र मोबाइलमा हेटौंडा तथा छतिवनका साथीहरूलाई स्पष्टीकरण दिइरहनुपरेको छ । यो अमिलो फेरि कहिले गुलियोमा परिणत हुने हो ? फेरि प्रतीक्षामा छौं ?
किन गरिन्छ सरस्वतीपूजा ?
माघको शुक्ल पञ्चमी अर्थात् वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीपूजा गरिन्छ । किन यसै दिन गरिन्छ त सरस्वती पूजा ?
सरस्वतीको पूजा हिन्दू मान्यता हो । शास्त्रीय अर्थात् पौराणिक मान्यतानुसार सृष्टिको रचनाको समय ब्रह्माले विभिन्न जीवजन्तु र मनुष्यलाई उत्पन्न गरे । पृथ्वीमा जीवजन्तु, वनस्पति र मानिससमेतलाई देखेर उनी प्रसन्न भए तर केही बेरमैं ब्रह्मालाई लाग्यो कि सृष्टि मूक पो बनेछ त । उनी निराश भए । ब्रह्माले आप्mनो समस्या शिवलाई बताए । शिवले बताएको उपाय अनुसार ब्रह्माले आप्mनो कमन्डलुबाट जल छम्के । जल छम्केको ठाउँमा चमत्कार देखियो । चार हात भएकी एक सुन्दर स्त्री प्रकट भइन् । त्यस स्त्रीको एक हातमा वीणा थियो र अर्को हात वरमुद्रामा थियो । बाँकी दुवै हातमा पुस्तक र माला थिए । ब्रह्माले स्त्रीलाई वीणा बजाउन अनुरोध गरे । अचम्म, स्त्रीले वीणा बजाउन शुरु गर्दा मधुर आवाज निस्क्यो । जसै वीणाको मधुरनाद निस्क्यो, तसै पृथ्वीका सम्पूर्ण जीवजन्तुलाई वाणी प्राप्त भयो । धाराको पानी कलकल गर्न थाल्यो, हावाले पनि सर्रसर्रको आवाज दिन थाल्यो, मानिसको पनि बोली फुट्यो, चराहरू चहचहाउन थाले । ध्वनिको पहिलो सञ्चरण भयो । ब्रह्मा हर्षित भए, उनलाई पृथ्वी पूर्ण भएको जस्तो अनुभूति भयो ।
त्यही बेला ब्रह्माले स्त्रीलाई वाणीकी देवी भने, सरस्वती भने । स्त्रीको पहिलो नाम वाणीकी देवी सरस्वती भयो । सरस्वतीलाई वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी, वीणपाणी तथा वाग्देवीसमेत अनेक नामले नमस्कार र पूजा गरियो ।
भुइँमा जल छम्केको र सरस्वती प्रकट भएको दिन वसन्त पञ्चमी हो । श्रीपञ्चमी हो । अर्थात् श्रीपञ्चमीको दिन सरस्वती प्रकट भएकी हुनाले सरस्वतीपूजा यसै दिन गरिन्छ ।
शिवेच्छाले ब्रह्माद्वारा प्रकटित सरस्वतीको प्रकटावस्थामैं एक हातमा पुस्तक थियो । पुस्तक भन्नु नै ज्ञान हो । पुस्तकबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ । ज्ञानको स्रोत पुस्तक भएको र विद्यार्थीहरूको दैनिकी यही पुस्तकसित हुने भएकोले विद्यार्थीले सरस्वतीको पूजा गर्दछन् ।
संसारलाई वाणी प्राप्त भएकोले वाणी अर्थात् बोली अर्थात् आवाजको दुनियाँसित सम्बन्धित सबै र वीणा एउटा वाद्ययन्त्र भएकोले पनि गला तथा कला सबैको सम्बन्ध जोडिन पुग्छ । गीत गाउने, सङ्गीत बनाउने, शब्द कोर्ने र नृत्य गर्ने सबैको सोझो र साझा सम्बन्ध यस दिनसित रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसै कारण कवि, साहित्यकार, कलाकार, गीतकार, सङ्गीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार सबैले यस दिन चित्त शुद्ध पारेर आप्mनो कर्म गर्न चाहन्छन्, पूजा गर्दछन् वा पूजा नगरे पनि सम्झन्छन् कर्ममा ।
वसन्त पञ्चमीकै दिन सरस्वती प्रकट भएको, यसै दिनदेखि संसारले वाणी प्राप्त गरेको, सङ्गीतको जन्म भएको तथा यसै दिन ब्रह्माले आप्mनो सृष्टि पूर्ण भएको ठानेको हुनाले कुनै पनि किसिमको कला र गलासँग सम्बन्धित हरेक व्यक्तिले सरस्वतीपूजा वा सरस्वतीको जन्मोत्सव मनाउने र मान्ने गर्दछन् ।
शरीर पनि साथ जाँदैन
जसले जे गरे पनि मृत्यु अनिवार्य छ । मृत्युलाई कसैले रोक्न सकेको देखिएको छैन । भौतिकरूपमा देखिएका हरेक कुराको अन्त्य अवश्य नै हुन्छ भन्ने कुरो सबैले बुझेकै छन् । यसै कारण कतिपयले जन्मको विपरीत मृत्युलाई मान्दा रहेनछन् । जन्मको स्वाभाविक प्रक्रिया मृत्यु हो । शुरुको समापन हो । जसको जन्म नै भएको छैन, ऊ पनि जन्मेपछि मृत्युवरण अवश्य गर्दछ ।
जन्म र मृत्युको बीचमा मानिसले धेरै सङ्घर्ष गर्दछ । धेरै किसिमका उतारचढाव जीवनमैं मानिसले बेहोर्दछ । सम्भवतः सबै जीवमध्ये मानिसले चाहिं अलि फरक किसिमको अनुभूति किन गर्नुपर्दछ भने मानिसको जीवन सबैभन्दा बुद्धिले बलियो छ ।
मानिस सामाजिक प्राणी हो । समाजमा उसले बस्नै पर्दछ । समाजमा उसको पहिचान बनेको हुन्छ । समाजमा मानिसले आप्mनो पहिचान आपैंmले बनाएको हुन्छ । उसको पहिचान उसको कर्मको आधारमा बनेको हुन्छ । यस कारण कर्मलाई सबैले प्रधान मान्नुपर्दछ र शास्त्रहरूमा मानिएको पनि पाइन्छ ।
मानिस नै सबै प्राणीमा धनको लागि मरिहत्ते गर्छ । मानिसले धन र यससँग सम्बन्धित सामग्री सङ्ग्रह गरेर धनी बन्न चाहन्छ । धनी देखाउन चाहन्छ । कुनै जमाना थियो कोही धेरै स्त्री राख्ने धनी कहलाउँथे । कुनै जमानामा धेरै दास राख्ने धेरै धनी कहलिए । कुनै जमानामा पशु वा जमीन धेरै हुने पनि धनी भनिए । अहिले धनी भनेको रुपियाँले गनिने युग आएको छ ।
शरीरलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउनेहरूको पनि कमी छैन । सकेसम्म आपूmलाई सुन्दर बनाउन मानिसले अनेक उपाय गरिरहेको छ । सामान्य प्रसाधनमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने यही सुन्दरता बढाएको भ्रम छर्ने प्रसाधन नै हुन्छ ।
धन र प्रसाधन दुवैले मानिसलाई आकर्षक बनाउँछ, वर्तमानमा । बनाएको छ पनि । तर दीर्घकालीनताको दृष्टिले हेर्ने हो भने दुवै नक्कली हुन् ।
जसले जति नै आपूmलाई धन तथा रूप वा आकर्षणमा सम्पन्न माने पनि मानिसले यो संसार छोड्ने बेलामा
केही पनि लाँदैन । सबैले देखेकै छन्– मानिसले आप्mनो शरीरलाई पनि लान पाउँदैन ।
जब शरीरलाई पनि यहीं नै छोडेर जानुपर्ने बाध्यता छ भने सकेसम्म अरूलाई सहयोग गर्दा हुन्छ । आपूmलाई टन्न पुग्नुको अर्थ समाजमा कीर्ति गर्नेतर्पm समय र श्रम लगाउने अवसर हो । समाजमा लगानी त गर्नैपर्दछ । समाजमा लगानी गर्ने सबै हुन्छन्, अनि त्यहीं लगानीबाट ब्याज आउँछ । जसले जति धेरै लगानी गर्दछ, उसले उति धेरै ब्याज पाउँछ । जसले समाजमा लगानी गर्दैन, जसले अरूको लगानीमा जहिले पनि आलोचना मात्र गर्दछ, आपूmले लगानी वा त्यागको आनन्द लिंदैन, ऊ सधैंभरि समाजको ऋणी बनिरहन्छ । समाजबाट सदैव लिने मात्र होइन, समाजलाई दिने पनि गर्नुपर्दछ ।
मानव समाजको समुच्चय नै देश हो । देश त्यसै बन्दैन । कुनै पनि देशको विकासको चरणलाई राम्ररी नियाल्यौं भने त्यहाँका नागरिकले निकै धेरै परिश्रम गरेको पाउँछौं । देशप्रति समर्पणको भाव राखेको पाउँछौं । आपूmलाई देशको अङ्ग र आप्mनो कर्मलाई पनि देशको सेवासित जोडेर हेर्दै आप्mनो कर्म र कर्तव्यबाट देशलाई हानि भएको छ कि फाइदा भएको छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्दछ आपैंmले ।
पहिले म के थिएँ, अहिले कस्तो भएँ भन्ने कुरो शारीरिक र भौतिक परिवर्तनसित सम्बन्धित छ । देशको अनुहार र विकासलाई पनि यससित हामीले जोड्न सक्नुपर्दछ । देशको मुहार परिवर्तनमा आपूmले केही सकारात्मक भूमिका खेल्न सकें कि सकिनँ भनेर आप्mनो मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्दछ ।
मानिस मर्दा आप्mनो शरीरलाई पनि यहीं छोड्छ । अन्तिम शøयामा सुत्दा वस्त्रविहीन हुन्छ, जसरी जन्म हुँदा वस्त्रविहीन थियो मान्छे । यस शाश्वत् सत्यलाई मानेर आप्mनोलागि धेरै थोक गर्ने मानिसले आप्mनोभन्दा अरूको लागि पनि केही गर्नुपर्छ । अरूको लागि भनेको नै समाजको लागि हो । समाजमा गरेका कीर्तिले नै उसलाई सम्झिरहन्छ । समाजमा उसको मृत्युपछि उसको उपस्थिति दर्शाउने गरी कायम गरिएका कीर्तिहरूले जब अरूलाई प्रेरित गर्दछ, तब उसको जीवन सार्थक हुन्छ । सार्थक जीवन कसलाई पो चाहिंदैन र?
जीवनको मूल्यको विषयमा आपैंmसित संवाद गरौं त ? के हामीले हरेक दिन आप्mनो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छौं ? अरूलाई पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न प्रेरित गरिरहेका छौं कि ? कुन क्षेत्रमा मलाई समाजले आपूm नभए पनि सम्झिइरहन्छ ?
अनाथ जसले गरे एक लाख दान
अनाथले पनि एक लाख रुपैयाँ दान दिन सक्छन् भन्दा सामान्यरूपमा पत्यार लाग्न सक्दैन तर एकजना अनाथले एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेपछि अक्षयकोषको लक्ष्य नै बदलिएको छ । एक अनाथालयले अनाथालयलाई अरू अनाथको सहयोगको लागि एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणाले सुन्ने सबैको कानलाई विश्वास नलाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।
रौतहटको गरुडामा रहेको वंशीराम जयसवाल अनाथालय चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको समय र अनाथालय संस्थापकले आप्mनो समय अब धेरै बाँकी नरहेको अवस्थाको विश्लेषणले एउटा नयाँ बहस जन्माउँछ कि अनाथालयको नियमित सञ्चालनको लागि एउटा अक्षयकोष स्थापनाभन्दा अर्को विकल्प थिएन । डा. आरबी प्रसादसित निकैपटक अनाथालयका बालबालिकाको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्थाको विषयमा अक्षयकोषबारे छलफल भएको थियो तर सार्थकता प्राप्त गर्न सकेको थिएन । यस विषयमा अन्तत्र्रिmया नै भयो ।
अनाथालयमा कहाँबाट आयो र कत्रो थियो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन र छैन पनि । यो आवश्यक पनि ठानिएन कहिल्यै । अनाथालय जन्मिंदाको कागजपत्र मैले नै लेखेको हुँ र अनाथालयसित मेरो अटुट सकारात्मक सम्बन्ध रहिआएको छ । बेलाबेलामा आपूmले सकेको र सक्ने आर्थिक, भौतिक, नैतिक तथा अन्य किसिमका सहयोग गर्दै आएको छु । केही सम्मानित मानिसको अगाडि ८५ वर्षीय संस्थापक वंशीराम जयसवालले यति भनेर मलाई गौरवान्वित पारे– “अनाथालयका सूत्रधार ।”
अनाथालयलाई एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका अनाथ बालक कृष्णकुमार सिंह हुन्, जो अहिले दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलस्थित सिउल विश्वविद्यालयमा एमफिल अध्ययनरत छन् । अनाथालयमा सहयोग गर्न आएका एकजना कोरियालीले सिंहलाई लगेका थिए । कोरियामा चिया नखाएर आपूmले भोकै बसेर भएपनि अनाथालयलाई नेपाली एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने बताउँदा उनमा रहेको खुशी र पीडा दुवै अवर्णनीय छ । तर आपूmजस्तै अनाथहरूको भविष्य आपूmजस्तै सपार्न र सकेसम्म अनाथहरूले आर्थिक अभावको पराकाष्ठा आपूmले जस्तै बेहोर्न नपरोस् भनेर आपूmले जसरी पनि एक लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्ने सिंहको भनाइ छ ।
एक करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना हुँदैछ । अनाथालयले सबैसित मागेरै यो लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अनाथ सिंहले आपूmले भोकको तपस्या गरेर भएपनि एक लाख रुपैयाँ दिने घोषणाले अनाथालय संस्थापक जयसवालले अक्षयकोषको लक्ष्य एक करोड एक लाख रुपैयाँ भएको बताउँदै आपैंmले पालेको अनाथको वचनको सम्मान गरेका छन् ।
अनाथालयले पालेका धेरै मानिस अहिले सफल व्यक्ति छन् । कोही शिक्षक छन् । कोही बिजुलीमा कर्मचारी छन् । कोही व्यवसायी बनेका छन् । अनाथहरूमा आएको सफलता वा यसले दिएको जीवनले धेरै जीवन मुस्कुराइरहेको छ । यस्ता मुस्कुराहटहरू अभैm विस्तार हुन पाऊन् भन्ने पवित्र उद्देश्यमा साथ दिन अनाथ सिंहले संस्थापक जयसवालको लक्ष्यप्रति समर्पित आग्रह गर्दछन् । आग्रहमा सहृदय समर्थन गर्ने अर्का युवा हुन्– बनारसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आप्mनो गलाले स्वागत गर्ने बताउने शिवशङ्कर पटेल । उनी बनारसमा रहेको बनारस/काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बिएचयु)मा सङ्गीत विषयमा स्नातकोत्तर गर्ने व्यक्ति हुन् । सम्भवतः अनाथहरूमा सङ्गीत विषयमा निकै कम भाग्यमानी अनाथहरूमध्ये हुन् यिनी । यिनको स्वर र सङ्गीतमा जुन जादू छ, त्यो अद्भुत छ । सामान्य हामी बसेको समाजतिर अद्वितीय छ । भविष्यमा यस युवकले गीत र सङ्गीतको क्षेत्रमा कुनै ठूलै तहलका मच्चाउन सक्ने विश्वासका आधारहरू दिएका छन् ।
दर्जनौं व्यक्तिहरू यस्ता छन्, जो समाजमा उदाहरणीय काम गर्दैछन् । अनाथालय नभएको भए यहाँबाट सम्मानित नागरिक बनेकाहरूको जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला ? कल्पना नगरेकै राम्रो ।
अनाथहरूको सुरक्षित भविष्यको लागि एउटा अक्षयकोषको स्थापना हुँदैछ । यसमा सहयोग गर्न मोदीलाई स्वागत गर्ने अनाथ र एमफिल गर्दै गरेका अनाथ दुवै अनाथले विन्ती गरेका छन् । अनाथलाई पालनपोषण गर्ने अक्षयकोष स्थापनाको महायज्ञमा सहयोग गर्न याचना गर्ने दुवै अनाथको याचनालाई सबैले आप्mनो क्षमतानुसार सुन्नुपर्दछ कि जस्तो मलाई लागेको छ ।
पञ्चवटी भनेको के हो ?
हिन्दू धर्म वा सम्प्रदाय प्रकृतिपूजक पनि हो । प्रकृतिको विभिन्न क्षेत्रलाई हिन्दूहरूले पूजा गर्दछन् । पूजा गर्नु भनेको पनि श्रद्धा वा सम्मान गर्नु हो । सम्मानका अनेक कारणहरू हुन सक्छन् । सबैभन्दा सजिलो हो धार्मिक जामा पहि¥याउनु । कुनै पनि क्षेत्रलाई धर्मसित जोडिदेऊ – एक पक्षले सम्मान गर्न थालिहाल्छ । यसै कारण हिन्दूमाथि आरोप पनि छ कि कतै एउटा ढुङ्गा सजाइदेऊ, हिन्दूहरूले अबीर र पूmल चढाएर आप्mनो देउता बनाइहाल्छन् र त्यसपछि त्यहीं ढुङ्गालाई पूजा गर्न थालिहाल्छन् । हिन्दूहरूले प्रकृतिलाई सम्मान गर्ने भएकै कारण ढुङ्गा, माटो, रूख, धरती, खोला, पानी, पहाड, सूर्य, चन्द्र, करिब सबै ग्रह आदिलाई पूजा गर्दछन् । पूजा अन्धविश्वास पनि हो । पूजा श्रद्धा पनि हो । श्रद्धा गर्नेले बुझेर गरेका हुन्छन् तर पूजा गर्नेले नबुझेको वा बुझेको जे पनि हुन सक्छ । नबुझेरै पनि पूजाको परम्परा कायम राखेको छ भने अन्धविश्वास मानेको ठहरिनु उचित हो तर हुन सक्छ कुनै वैज्ञानिक कारण होला, जुन उसलाई सुन्ने वा बुभ्mने फुर्सद नहोओस् । यसै कारण के पनि भनिन्छ भने जहाँ अन्धविश्वास हुन्छ, त्यहाँ मानसिक तनाव कम हुन्छ अथवा ‘डिप्रेसन’ कम हुन्छ । अन्य दृष्टिले अन्धविश्वास पछौटेपन हो, सामाजिक विकासलाई अवरुद्ध पार्ने हो तर डिप्रेसन कम देखिएको पनि यही अन्धविश्वास मान्नेहरूमा नै हो ।
अन्धविश्वासी हुनुपर्छ भनिएको कदापि होइन तर मान्यताहरूप्रति फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । हाम्रो समाजमा अनेक मान्यताहरू रहेका छन् । मान्यताका पछाडि एउटा न एउटा कथा हुन्छ । कथाजस्तो लाग्ने इतिहास हुन्छ । इतिहास वा कथामाथि अन्धविश्वास हुन्छ र यही अन्धविश्वासको अनुकरण हुन्छ तर फेरि पनि के भन्न मन लाग्छ भने अनुकरणलाई आप्mनै ज्ञानको आलोकमा पुनर्नवीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्नेतर्पm पनि सोच्नुपर्दछ ।
हिन्दू समुदायमा वनस्पतिको क्षेत्रमा पञ्चवटी निकै प्रचलित शब्द हो । रामायणमा पञ्चवटीलाई एउटा ठाउँको रूपमा चिनाइएको छ । पञ्चवटी वनभित्रको कुनै स्थान हो, जहाँ वनबासको क्रममा राम, लक्ष्मण र सीताले महŒवपूर्ण धेरै दिन बिताएका थिए । कहिलेकाहीं मनमा प्रश्न उब्जन्थ्यो कि त्यो ठाउँको नाम किन पञ्चवटी पर्न गएको होला ? कहिलेकाहीं पञ्चवटीको सन्दर्भ चल्दा पनि आधिकारिक उत्तर पाइन्नथ्यो ।
भारतको उत्तर प्रदेशको बनारसमा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय परिसरको उद्यानमा घुम्दा पञ्चवटीको वास्तविक अर्थ पाएँ । आखिर विश्वविद्यालय भनेकै ज्ञानको केन्द्र हो रहेछ । प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवैरूपमा यसले ज्ञान वा शिक्षा दिने रहेछ । विश्वविद्यालयको एउटा उद्यानमा पञ्चवटी लेखिएको छ । पञ्चवटीमा कुन कुन वट वा रूख पर्दछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ । विश्वविद्यालय परिसरको पञ्चवटीले शाब्दिक
अर्थ पनि बताएको छ र व्यवहारमा पञ्चवटी देखिन्छन् पनि । पञ्चवटीको अर्थ बुभ्mन चाहनेले यसको पाटी मात्र पढे पुग्छ ।
हामीकहाँ यस प्रकारको उद्यान बनाउने चलन नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । कुनै पनि धार्मिक ठाउँमा मेला लाग्छ अर्थात् धार्मिक ग्ल्यामर हुन्छ तर यस प्रकारको सन्देश कोही केही बोकेर जान सक्ने हुँदैन कि उसलाई सधैंभरि काम लागोस् । सदैव आपूmलाई ज्ञान देओस् र अरूलाई पनि दिइरहोस् । ज्ञानको केन्द्रले त अझ यस प्रकारको ज्ञान दिइरहनुपर्दछ । कक्षाकोठाबाहिर पनि ज्ञानको सुवास छर्ने शैक्षिक संस्थाहरूको अभाव नै छ । यस प्रकारको दृष्टिकोण बनाउने व्यक्तित्वहरूकै कमी छ ।
आफ्नो इतिहासको जानकारी
हरेक ठाउँको आप्mनो इतिहास हुन्छ । हरेक ठाउँले केही इतिहास बोलेको हुन्छ । हरेक ठाउँमा इतिहास लुकेको हुन्छ । इतिहास नभएको ठाउँ हुँदैन ।
माथिका वाक्यहरू आदर्श हुन् । यथार्थ पनि हुन् । यथार्थ नलाग्न पनि सक्छ, यथार्थ नलाग्नु वा नहुनुमा त्यो ठाउँ दोषी होइन । त्यस ठाउँका बासिन्दा दोषी हुन् । स्थानीय यस कारण पनि दोषी हुन् कि कुनै पनि ठाउँको इतिहास बनाउने, बचाउने वा पैmलाउने काममा स्थानीयको भूमिका अरूको भन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । अन्यत्रको मानिसले त्यत्ति महŒव किन दिनुप¥यो ? यसमा उनको स्वार्थ के हुन्छ ? वा कसैले कुनै ठाउँलाई महŒव दिन खोज्छ भने त्यो ठाउँप्रति उसको मोह हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ तर स्थानीयले कुनै स्वार्थ वा लोभको अन्वेषण गरेर आरोप लगाउँछन् भने त्यहाँबाट अलग्गै हुन पुग्दछन् । यसरी कोही कुनै ठाउँमा रुचि लिन्छ भने उसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । प्रोत्साहित गर्न सकेमा त्यो ठाउँले पनि प्रोत्साहन पाउन सक्छ । यदि दुरुत्साहन भयो भने ठाउँ आपैंm दुरुत्साहित हुन्छ, बहिष्करणमा पर्छ । ठाउँको दुरुत्साहन हुनु भनेको कोही जान्ने वा खोज्न सक्नेछ भने पलायन भएर त्यस ठाउँबारे बिस्तारै बुझाइ कम हुँदै जान्छ वा त्यस ठाउँलाई चिन्ने–जान्नेहरू कम हुँदै जान्छन् । ठाउँबारे जान्ने कम हुने मात्र होइन, त्यो ठाउँविशेषले बडो सहजरूपले आप्mनो इतिहास गुमाउन पनि सक्छ । यदि कहींको इतिहास गुम्ने खतरा छ भने त्यसको कारणबारे बुझ्ने प्रयास गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
इतिहास गुमेपछि फेरि खोजेर भेटिन्न । एकचोटि हराएको इतिहासको खोजी गर्न निकै मुश्किल हुन्छ र हाम्रो समाजको कमजोरी के छ भने हामीले सितिमिति आप्mनो मान्छेको कुरा सुन्दैनौं, पत्याउँदैनौं । कोही आप्mनो मान्छे, स्थानीय व्यक्तिले साँचो कुरा गरेको छ भने हामी अनेक अनावश्यक प्रश्न गरेर हतोत्साहित गर्छौं । यदि सोही कुरा अरूले भन्दछ भने उसलाई जान्ने ठानेर ताली बजाउँछौं । यसै कमजोरीको फाइदा उठाएर अरूले हाम्रो ठाउँबारे केही सत्यमा अनेक असत्य मिसाएर भनिदिन्छ वा सबैले पत्याउन थालेको देखेर झन् मिथ्याङ्क प्रस्तुत गरेर इतिहासलाई अन्यत्रै मोडिदिन्छ ।
हामीलाई थाहा छ हरेक गाउँको इतिहास हुन्छ । हरेक गाउँको गर्व गर्न सकिने विगत हुन्छ । हरेक ठाउँले आप्mनो विगत भोगेको छ । विगतलाई बिर्सेर हामीले वर्तमानलाई बढी महŒव दिएका हुन्छौं । बढी महŒव दिइएको विषय वा वस्तुले कति समयसम्म महŒव पाइरहन सक्छ वा आपूmलाई कति समयसम्म काम लागिरहन्छ भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छौं वा अनुसन्धान नै गर्दैनौं । अनुसन्धान गर्नुको साटो हामी सतही कुरामा लाग्दछौं । अनावश्यक तर्क गर्दछौं, कुतर्क गर्दछौं । कुतर्कले तर्कवान्को पनि चित्त दुखाउन सक्छ । यदि कुतर्कले तर्कवान् पराजित भएको देख्दछौं भने हामी गौरवान्वित महसुस गर्दछौं । त्यो गौरव जसको कुनै मूल्य नै छैन, हुँदैन । मूल्य नहुने तर्क गर्नेले इतिहासको मूल्य के बुझेको होला र ?
हो, इतिहासको मूल्य बुझ्ने निकै कम हुन्छन् । अत्यन्त कम मानिसले इतिहासको मूल्य बुझ्दछन् । इतिहासको मूल्य बुझ्नेले इतिहासको निर्माण पनि गर्दछन् ।
एउटा सामान्य कुरा के बुझौं भने के हामीले आप्mनो ठाउँको इतिहासबारे केही बुझेका छौं ? इतिहासबारे नबुझेको भए अलिकति खोजौं, बुझौं र बुझ्नेलाई सहयोग गरौं । इतिहासबारे बुझ्नेले नै आप्mना सन्तानलाई त्यसबारे बताउन सक्छ वा इतिहासबारे जानकारी गराउन सक्छ ।
के हामी यसप्रति जिम्मेवार छौं ?
एउटा ठाउँमा यही लेखिएको पाइयो । अन्यत्र जाँदा सबैतिर दानलाई पुण्य भनिएको पाइन्छ तर यस ठाउँमा भने यस्तो लेखेको पाइयो । देख्नेबित्तिकै अचम्म लाग्नु स्वाभाविक हो । अझ कतिपय ठाउँमा यस प्रकारका कुराहरू लुकाएर लेखिएको हुन्छ कि सम्बन्धित व्यक्तिले देख्नै पाउँदैन । बिमा कम्पनीले जीवन बिमा गर्दा बिमितसित सोभैm सही गराउँछन् । मसिनो अक्षरमा लेखिएका शर्तहरू पढ्न दिंदैनन् वा नपढेकालाई पढेर सुनाउँदैनन्, बुझाउँदैनन्, के भन्न खोजेको हो भने । तर मुख्य सडकसँगै जोडिएको र मुख्य प्रवेशद्वारमैं हिन्दी भाषामा ‘दान दिन मनाही छ’ लेखिएको देखेपछि एकछिन त सोच्न जो पनि बाध्य हुनुपर्छ । अझ धार्मिकस्थलमा । प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा यसो लेखिनु आपैंmमा आश्चर्यजनक त हुँदै हो । त्यहाँका केही मानिसलाई सोधें पनि । खासमा थाहा नभएको जवाफ आयो । हुनत सर्वसाधारणलाई सामान्यतया गहिरा कुराको जानकारी हुँदैन र गहिरा कुरा गर्नेहरू सामान्यतया सडकछेउ भेटिंदा पनि भेटिंदैनन् ।
भगवान् गौतम बुद्धले आप्mनो अन्तिम सास वायुमण्डलमा मिलाएको ठाउँ कुशीनगरमा लेखिएको बोर्ड हो यो । सम्भवतः केही वर्ष पहिले अन्य तीर्थस्थलमा जस्तै यहाँ पनि माग्नेहरूले पर्यटकहरूलाई हैरान पारेका होलान् अनि पर्यटकहरूले सम्बन्धित निकायमा बारम्बार यस विषयमा जानकारी गराएपछि बाध्य भएर सरकारले यो कदम चालेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान चाहिं लगाउन सकिन्छ ।
बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि सर्वाधिक महŒवका तीन तीर्थस्थलहरू छन् । बुद्ध जन्मेको ठाउँ, नेपालमैं छ लुम्बिनी । बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ, बिहारमैं छ, बोधगया जुन गयानजिक पर्छ । भगवान् बुद्धले आप्mनो अन्तिम सास वायुमण्डललाई उपलब्ध गराएको कुशीनगर जुन बिहारमैं पर्दछ, गोपालगंजभन्दा पश्चिम तथा गोरखपुरभन्दा पूर्व । दुवैतिरबाट केही घण्टाको दूरी छ । बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनी र बुद्धत्व प्राप्त गरेको ठाउँ बोधगयामा पनि यस किसिमको बोर्ड लेखिएको देखिन्न । नेपाल र भारतका अन्य तीर्थस्थलमा पनि यस किसिमका बोर्ड पढिएको छैन ।
यसले धेरै कुराको सङ्केत गरेको छ । धार्मिकस्थलमा दानको नाउँमा ठग्नेहरू पनि हुन्छन् । ठग्नेहरूबाट सावधान हुनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि सही हो ।
यसको अर्थ यो कदापि नहोला कि हामीले कतै दान दिनु नै हुन्न । गौरका एकजना धनी मानिसले दान दिंदा उनको धन कम हुँदैन, बरु दान दिएकोभन्दा पच्चीस प्रतिशत बढी फर्केर आउँछ । शास्त्रहरूमा पनि यस प्रकारको आस्थाका कुरा गरिएको हुन्छ । तर दिइएको दानको उपयोग गर्ने पात्र हुनुपर्दछ । दानको दुरुपयोग हुनुहुँदैन ।
हो, यस ठाउँमा दानको नाउँमा रकमको माग गर्ने र दानको रकमको उपयोगको साटो दुरुपयोग गर्नेहरूको उपस्थिति धेरै भएकोले यस किसिमको बोर्ड झुन्ड्याइको हुनुपर्छ । वास्तवमा दान त अवस्था हेरेर गर्नुपर्छ । दानको उपयोग हुने र दान पाउन योग्य पात्र छ भने दान दिनु पनि पर्दछ । दान त्यसले पाउनुपर्दछ जो समग्रमा असमर्थ छ, वा जसले प्राप्त दानको समग्र सदुपयोग गर्दछ । आप्mनो हितमा थोरै र सार्वजनिक हितमा बढी ।
सोचाइ र अभिव्यक्तिको स्वांकुश
लोकतान्त्रिक व्यवस्था र व्यक्ति पनि हुन्छ । व्यक्तिको लोकतन्त्र उसको मानसिक स्वतन्त्रतामा निर्भर हुन्छ । देवकोटा के भन्दछन् भने यदि कुनै वा कसैको मोहनीमा छौ भने तिमी आपूmलाई राम्ररी चिन्न सक्दैनौं, तिम्रो पहिचान मोहनीसित जोडिएको हुन्छ, तिम्रो मोहनी तिमीलाई सत्य लाग्दछ तर जब पचास गज मोहनीबाट टाढा जान्छौ, तब तिमीलाई वास्तविकताको दर्शन हुन्छ ।
मानिसको सोचाइलाई आप्mनो बनाउनुपर्दछ । हाम्रो सोचाइ निर्देशित हुनुपर्छ तर स्वनिर्देशित । सामान्यता कुनै व्यक्तिको छायामा रहुन्जेल उसको लागि सोचिदिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ वा उसको चिन्तनका निम्ति सोचिदिनुपर्ने हुन सक्छ । अझ कुनै व्यवस्थाका पक्षपाती भयौं भने सोही व्यवस्थाको निम्ति आप्mनो चिन्तनलाई निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य व्यवस्थाका चिन्तनप्रति स्वतः हामी नकारात्मक हुन्छौं वा तटस्थ भावले अध्ययनसमेत गर्न सक्दैनौं । सर्वसाधारणले राक्षस भनेर कसैलाई गाली गर्दा गालीमा यो चिन्तन भएको देख्न सक्छौं । यस प्रकारको आरोपित चिन्तनका हामी धनी हुँदैछौं वा चिन्तनका क्षेत्रमा हामी गरीब बनेर आप्mनो पहिचान स्थापित गर्दैछौं ।
चिन्तन, अध्ययन र स्वानुभव निश्रित हुनुपर्दछ । अध्ययन र स्वानुभवभन्दा कसैको बोली वा भाषण वा प्रवचन कुनै पनि मूल्यमा स्थायी चेतनदीप बनिरहँदैन मस्तिष्कमा । हृदयलाई सदैव आलोकित गरिरहन सक्दैन र कुनै निश्चित ठाउँमा वा निश्चित अवधिपछि बालिएको दियोको प्रकाश मधुरो हुन सक्छ । यसर्थ अध्ययनले हृदयलाई आलोकित पार्नुपर्दछ र स्वानुभवले वैचारिकता, चिन्तनपरकता वा अभिव्यक्तिशीलतालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ ।
वाक् हिन्दी पत्रिकाका सम्पादक सुधीश पचौरी एक ठाउँमा भन्छन्–“खतरा सिर्पm अभिव्यक्ति की आजादी पर नहीं, खतरा हमारे अंदर भी है कि हम उन्हीं स्थितियों पर सोचना चाहते हैं, जो हमें प्रिय लगे, अप्रिय, दुष्ट, खतरनाक पर हम नहीं सोचते । उससे टकराने की बात तो बहुत बाद की है ।”
सोचाइमाथि पनि हामीले अनेक अङ्कुश लगाउने गरेका छौं । बाह्यांकुशको कुरो होइन, आभ्यान्तरिक अङ्कुशले पनि हामी सोचाइलाई या त कुण्ठित बनाउँछौं वा दमन गरिदिएर आउनै दिंदैनौं । असह्य दमन भएर कतिपय सोचाइ मस्तिष्कमैं अल्पायुमैं मृत्युवरण गर्दछन्, जसको हत्यारा कोही हुँदैन । हत्यारा हुनलाई हत्या भएको त देखिनुप¥यो नि । म आप्mनो विचारको हत्यारा म आपैंm हुन्छु । यसलाई बाहिर देखायो भने मलाई हत्याराको ट्याग लागिहाल्छ भन्ने वैचारिक दरिद्रता मभित्रै छ । मैले हत्या गरेको विचारको फोटो पनि देखाउन सकिन्न । जमानाले कुनै दिन यसको पनि एक्स–रे गर्ला ताकि हत्या गरिएका वा दबाइएका विचारहरूको उत्खनन हुन सकोस् ।
कोही किन आप्mनो सोचाइलाई दबाउँछन् ? कोही किन आपैंmमाथि दमन गर्दछन् । यसको परिणाम त यो पनि देखिएको छ कि कोही आप्mनो जीवनमा के बन्न चाहन्छ भन्ने थाहै छैन वा उसले आपूmलाई चिन्नै सकेको छैन । आपूmलाई चिन्नै नसक्ने त कोही हुँदैन होला भन्ने प्रश्न उब्जनुलाई पनि अस्वाभाविक नमानिएभैंm आप्mनै अभिव्यक्ति वा चिन्तनको स्रोतमाथि कोही किन आपैंmले आक्रमण गर्दछन् ? आपैंmलाई किन साँघुरो बनाउँछन् ? निजी लोकतन्त्रमाथि किन धावा बोल्दछन् कोही ?
व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र चिन्तनको स्वतन्त्रताले मानिसलाई सार्वभौम बनाउने हो तर मानिसले किन यी आप्mना मूल्यवान् सबै सम्पत्तिमाथि बाह्यान्तरिक आक्रमण हुन दिन्छन् ? आक्रमणलाई बचाउन किन खोज्दैनन् ? वा आक्रमण हुँदा पनि आनन्दित हुन्छन् वा आप्mनै वैचारिक हत्याको अमूक साक्षी बन्दछन् मूर्तिवत् । मानवीय स्वतन्त्रताको मूल्य कुन अर्थमा स्थापित हुन सक्ला ? जब चिन्तन नै बन्धकी राखेर कसैको छत्रछायामा आप्mनो अभिव्यक्तिलाई आलोकित भएको गर्वानुभूति गर्दछन्, जुन वास्तवमा भ्रमानुभूति हो । गुलामी हो ।
अधिकांश गाउँमा मेला लाग्ने गरेको छ । मेला लाग्ने विभिन्न अवसरहरू हुनुपर्छ । अवसरमा गाउँको लागि तीन कुरा आवश्यक देखिन्छ ।
पहिलो, कुनै सांस्कृतिक अवसर । सांस्कृतिक अवसरमा मेला लगाउन धेरै सजिलो छ । उदाहरणको लागि जन्माष्टमी, दुर्गापूजा, कात्तिक पूर्णिमा, वसन्त पञ्चमी, होली, चैते दशैं आदिका अवसरमा मेला लगाउन खास धेरै प्रचारप्रसार गर्नुपर्दैन । गाउँका मानिसहरू तुलनात्मकरूपमा धार्मिक स्वभावका हुन्छन् । यसले गर्दा खासै कुनै खेलतमासा नहुँदा पनि मेला लाग्छ । मेलामा गाउँका छोरीबुहारी तथा अन्य महिलाहरू सबै गाउँको मेलामा सजिलै पुग्छन् । गाउँको मेला भएपछि बाहिरको कुनै डर पनि हुँदैन । डराउनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । प्रायः गाउँको मठमन्दिर वा धार्मिक तथा सांस्कृतिक थलोमा यस प्रकारका मेला लगाइने गरिन्छ ।
दोस्रो, महाविरी झन्डा । यो यति सजिलो छ कि गाउँमा एउटा मेला समिति गठन ग¥यो र एउटा महाविरी झन्डा बनायो । प्रायः मङ्गलवार वा शनिवारको दिन पूजा गर्न सुरुआत ग¥यो, जुन दिन हनुमानको हो भनेर मानसिकरूपमा हनुमानभक्तलाई प्रभावित पार्न सजिलो होओस् । मेला समितिले केही चन्दा उठायो । तोकिएको दिनमा झन्डा उठायो । मेला त्यसै लाग्छ । मेलामा सम्भव भएसम्म खेलतमासा बोलायो वा केही नबोलाए पनि केही रक्सी बेच्ने र केही तासजुवावालालाई संरक्षण ग¥यो । यस प्रकारको मेलाले केही विकृति पनि ल्याउँछ । किनभने झन्डामेला भएको ठाउँमा नाच पनि हुन्छ । नाचले विकृति ल्याउने त होइन तर अश्लील भोजपुरी गीत र त्यसको नृत्यले समाजमा विकृति ल्याउँछ ।
झन्डामेला कतिपय ठाउँको वा गाउँको संस्कार भइसकेको छ । यहाँ संस्कार भन्नाले हिन्दू धर्ममा उल्लिखित सोर संस्कार होइन, एक किसिमको संस्कृति भइसकेको छ । कतिपय गाउँमा एक होइन, अनेक झन्डा बनाइन्छन् । एकै ठाउँमा पचासौं झन्डा बनाएको पनि देखिएको छ ।
तेस्रो, महायज्ञ वा व्यवस्थित मेला । विभिन्न देवदेवीको मूर्ति बनाएर कुनै साधुलाई प्रमुख बनाइ एक हप्ताभन्दा लामो समयको मेला लगाउने चलन पनि गाउँघरमा अभैm पनि छ । अनेक देवदेवीको मूर्तिले गाउँलाई आकर्षित गर्दछ वा भनूँ गाउँलेलाई आकर्षित गर्दछ । यसले गाउँलेको आत्मसम्मानलाई जोड्दछ । आत्मसम्मान बढाएको अनुभूति हुन्छ । उमेरले जति धेरै बढेका हुन्छन् ग्रामीण समुदायका मानिस, उति नै धेरै आस्था, श्रद्धा र लगन हुन्छ महायज्ञप्रति । आप्mनो, गाउँको र समाजको प्रतिष्ठा ठानेर सबैले सकेको सहयोग गर्दछन् र सकेसम्म ठूला नेताहरूलाई पनि बोलाउने प्रयास गर्दछन् ।
मेलामा खेलतमासा होओस् कि नहोओस् तर फेरि आकर्षण बढ्न थालेको भने कुस्ती हो । गाउँमा कुस्ती हेर्न दशौं हजार मानिस सजिलै जम्मा हुन्छन् । कुस्तीलाई मर्दाना खेलको रूपमा लिइन्छ । यस कारण कुनै नाच वा तमासा बोलाउँदा जति खर्च लाग्छ, त्यसभन्दा कमै खर्चमा मेला लगाउन कुस्तीबाजलाई बोलाउँदा हुन्छ । कुस्तीले निकै आकर्षण बढाएको देखिन्छ, ग्रामीण समुदायको मेलामा । मेलाको प्रचारप्रसारमा कुस्तीको पनि विज्ञापन हुन्छ भने मेलाको दिन मेलाको लागि उपयुक्त समय मिलाउन किसानदेखि गोठालाहरूसमेतले पहिलेदेखि नै सोच्न थालेका हुन्छन् ।
मेलाको आकर्षण गाउँमा निकै रहेको छ । कुनै गाउँमा मेला लाग्छ भने गाउँबाट बाहिर अर्थात् शहर बजारमा गएकाहरू पनि फर्केर आउँछन् । अभिभावकहरू मेला भर्न गाउँबाहिर रहेका आप्mना सन्तानलाई बोलाउँछन् ।
मेला त रमाइलो हुन्छ नि । गाउँका मेलाहरू रमाइला हुन्छन् । सामान्यतया हरेक गाउँमा मेला लाग्दा गाउँका केही मानिसलाई भने फाइदा भएकै हुन्छ ।
फैलिन थाल्यो फेरि सामाचकवा
सामाचकेवा–सामाचकवा–सामाचखेवा जुन नामले भने पनि गाउँमा सबैले सजिलै बुझ्ने एउटै हो ।
तराई–मधेसको समाजमा अनेक संस्कृति विलुप्त हुने अवस्थामा कतिपय सांस्कृतिक परम्परा भने केही विकृतिपूर्ण हाँसो हाँस्न थालेका छन् । कतिपय विकृतिलाई अब संस्कृतिले स्वीकृति दिइसकेको छ अर्थात् संस्कृतिले पचाइसकेको छ । कतिपय संस्कृतिको पुरानो रूप बिग्रेर संस्कृति नै विकृति भइसकेको वा विकृति नै संस्कृति भइसकेको छ । कतिपय संस्कृति त लोप नै भइसकेको छ । लोप भइसकेको संस्कृति फेरि फर्केर आउँदैन भन्ने कुरो सबैले बुझेका छन् ।
एउटा सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास भएको छ । संस्कृतिसम्बन्धी फोटोलाई गर्वका साथ सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा ट्वीटरहरूमा राखिन थालिएको छ । सर्वसाधारणबाट पनि सम्मानका साथ लाइक र कमेन्टहरू प्राप्त हुन थालेका छन् । संस्कृतिसम्बन्धी सकारात्मक शुभकामना तथा बधाई दिन थालिएको छ । यसमा प्रकट हुने गरेका भावहरू हृदयस्पर्शीदेखि उत्साहित बनाउनेसम्मका हुन्छन् । समाजका लागि अगुवा मानिने, आदर्श मानिने तथा विशिष्ट मानिनेहरूले पनि सामाजिक सञ्जालदेखि वास्तवमा संस्कृतिप्रति सम्मान दर्शाउने वक्तव्य र फोटाहरू राख्ने, खिचाउने तथा प्रोत्साहित गर्ने काम गर्दछन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणमा झन् उत्साहको सञ्चरण हुन्छ ।
तर गज्जबको उत्साह त वास्तवमा गत वर्षदेखि देखिन थालेको छ । उदाहरण एउटा सामाचकवामात्र होइन । अन्य सांस्कृतिक आयामहरू पनि छन् जसमा सकारात्मक सहयोगात्मक सम्बन्ध देखिएको छ समाज र संस्कृतिबीच ।
गत वर्ष पनि कात्तिक महीनामा सामाचकवा मनाइएको थियो । गत वर्ष पनि उत्साह थियो, गत वर्ष पहिलेभन्दा केही धेरै ठाउँमा सामाचकवा मनाइएको थियो । गत वर्ष सबैतिरबाट निकैपछि सामाचकवामा फेरि उत्साह आएको व्याख्या गरिएको थियो । तर यस वर्ष सामाचकवा मनाइन थालिएको दोस्रो दिनमैं सबैतिर जुन रूपमा आकर्षण, समर्थन र सहभागिता देखिएको छ, यसले फेरि सामाचकवाको दिन फर्केर आएको विश्लेषण गरिन थालिएको छ ।
हाटबजारमा सामाचकवाको प्रतिमा एकै छिनमा बिक्री भएको छ । कुम्हालेहरू पनि अचम्भित छन् । व्यापार फस्टाएकोमा खुशी छन् ।
गत वर्ष खास केही भएको थिएन । गत वर्ष सामाचकवाभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो र सामाचकवापछि प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो ।
गत वर्ष छठको समयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले छठ पर्वको प्रत्येक घाटमा पुगी व्रतालुहरूसित भेटघाट गरेका थिए । व्रतालुहरू प्रोत्साहित भएका थिए । व्रतालुहरूले आप्mनो सम्मान बढेको अनुभव गरेका थिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि आप्mनो सम्मान बढेको अनुभव गरेका थिए । छठ पर्वलगत्तै सामाचकवा आएको थियो । सामाचकवालाई पनि त्यही रूपमा सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रोत्साहित गरेका थिए । जब सबै सम्मानित मानिसहरूले आप्mनो संस्कृतिलाई सम्मान गर्दछन्, परिणाम सबैको सामुन्ने छ ।
सामाचकवाले फेरि दिन फेरिन लागेको रैछ । यो सुखद खबर हो । सामाचकवाले फेरि विस्तार पाउँदैछ । यसमा विकृति कम होओस्, संस्कृतिले सुकृति पैmलाओस् । यसले चेलीबेटीको प्रतिष्ठा बढाओस् । अझ यसले हाम्रो समाजको प्रतिष्ठा बढाओस् । यस आप्mनै संस्कृतिले आप्mनो प्रतिष्ठा बढाओस् ।
उच्च कुलमा जन्मिएर मात्र नहुने रहेछ
मानिसले साधारण कुरा जति थाहा पाउँछ, विशिष्ट कुरा त्यत्ति पाउँदैन । मानिस विशिष्ट कुरा जति थाहा पाउँछ, सामान्य कुरा त्यत्ति थाहै पाउँदैन ।
दुवै तर्कले आप्mनो ठाउँमा सत्यताको बोध बोकेका छन् । यी दुवैमा नजिक र टाढाको सम्बन्ध हुन्छ । नजिककाले सामान्य कुराहरू पनि थाहा पाउँछन् । टाढाकाले विशिष्ट कुरा मात्र थाहा पाउँछन् ।
मानिस आप्mनो अभिरुचि र आवश्यकता अनुसारको कुरा सम्झिन खोज्छ । बाँकी कुरा देखेर पनि उसले बिर्सन्छ ।
आँखाले ननिदाउँदासम्म केही न केही हेरिरहन्छ तर हेरेको सबै कुरा देख्दैन । देखेजति सबै कुरा आँखामा अडिरहन सक्दैन । आँखाले आप्mनो काम गर्दछ र आँखालाई अड्याउने काम दिमागले गर्दछ अर्थात् आँखाले गरेको काममा मगजको भूमिका ठूलो हुन्छ । मगज संलग्न नभएको अवस्थामा आँखाको हेराइको कुनै महŒव हुँदैन ।
मानिसले आप्mनो परिचय आपैंm बनाउँछ । आप्mनो परिचय आपैंm गुमाउँछ । परिचय बनाउँदा उसले आपूmसित आप्mना नजिककालाई पनि चिनाउँछ । मातापिता र गुरुलाई चिनाउनेहरू धेरै छन् । परिचय गुमाउँदा उसले आप्mनो मात्र गुमाउँछ । यदि परिचय गुमाउने आपूm मात्र भनाउँदा पात्रहरू धेरैजना भएमा समाजको परिचय नै गुम्न पुग्छ । अरूको भेषभूषा, बोली, रहनसहन, संस्कृति अपनाउँदै जाँदा परिचय गुमाउँदै गएको हामीले देखेका छौं । आप्mनो परिचय बनाइराख्न हरेक व्यक्तिले आप्mनो परिचय बचाइराख्नुपर्छ, हरेक व्यक्तिले आप्mनो परिचय बनाइराख्नुपर्छ ।
मैले फेसबूकमा एउटा स्टेटस लेखें जिज्ञासावश गत हप्ता– तत्कालीन मिथिलाका राजा सीरध्वज जनकको छोराको नाम के थियो ? तत्कालीन अयोध्याका राजा दशरथकी छोरीको नाम के थियो ?
फेसबूकमा एउटा उत्तर आयो– कौशल्याको कोखबाट शान्त । यो उत्तर थियो सुमन कोइरालाको । सुमन कोइराला हेटौंडामा सामाजिक अध्ययनका शिक्षक हुन् । उनी संस्थागत विद्यालयमा मैले बुझेसम्म अढाई दशकदेखि पढाइरहेका छन् । हेटौंडामैं घरजम गरेर बसेका छन् तर उनी वास्तवमा झापाका हुन् । म उनलाई दाइ भन्छु, उनी मलाई भाइ भन्छन् । कुनै बेला हेटौंडामा परिचित हामी थ्री ‘एस’ (तीन ‘स’ अर्थात् सञ्जय, सुनील र सुमन)मध्ये एक हुन् । थ्री एसमध्ये अर्काचाहिं नवलपुरमा अङ्ग्रेजी शिक्षक हुन् ।
अर्को एकजनाको जवाफ आयो अङ्ग्रेजी भाषामा । त्यसको आशय थियो– प्रश्न नै गलत । उत्तरदाताको नामचाहिं मलाई लागेसम्म असली होइन । नामचाहिं महिलाको थियो ।
फेसबूकमा पाँच हजार मित्र छन् तर करिब चार दर्जनजना मित्रले लाइक गरे । जिज्ञासालाई लाइक गर्नु भनेको प्रश्नप्रति चित्त बुझेको मैले ठानें अर्थात् तिनीहरू पनि सम्भवतः उत्तर जान्न चाहन्थे ।
फेसबूकमा जिज्ञासा राखेपछि मोबाइलमा र भेटमा घटीमा सयजनाले राजा दशरथकी छोरी पनि थिए ? राजा जनकको छोरा थियो ? कहाँ लेखिएको छ ? कुन रामायणमा यससम्बन्धी जानकारी छ ? तपाईंलाई कहाँबाट यस्ता जानकारी आउँछन् ? आदि प्रश्नहरू सोधे । जिज्ञासा र प्रहार दुवै हुन्थे । एकजना धार्मिक स्वभावका मानिसले अलि रोष नै प्रकट गरे । मलाई दुःख लागेन ।
क्याम्पसका शिक्षकहरू, विद्यालयका शिक्षकहरू, केही सञ्चारकर्मीहरू र केही विद्यार्थीहरूसमेतले यस विषयमा आप्mना तर्क दिए । राजा जनक निस्सन्तान थिए । कृषियज्ञबाट पुत्रीरत्न प्राप्त भएको थियो । राजा दशरथ निस्सन्तान थिए । पुत्रेष्टि यज्ञ गरेपछि एकैचोटि चार पुत्र प्राप्त भएका थिए । आदि, आदि ।
केही काम नगर्नेको परिचय बन्न सक्दैन । आप्mनो परिचय मानिस आपैंm बनाउँछ । अरूको परिचय उधारो हुन्छ । उधारो परिचयले निश्चित अवधिपछि गिज्याउन सक्छ । आप्mनो परिचय नहुँदा वा नबनाउँदा उधारो परिचय मूल परिचयसित बगेर जान बेर हुँदैन, बाढीको पानीजस्तै । बाढीको पानीले नदीको परिचय दिंदैन ।
सन्तानको परिचयले आमाबुबालाई चिन्नु वा चिनाउनु सामान्य प्रक्रिया हो । यो हुनुपर्छ र भएको पनि छ । सामान्य व्यक्ति–वृत्त अर्थात् बायोडाटा बनाइँदा बुबाआमाको नाम लेख्नैपर्छ तर छोराछोरीको नाम लेख्नु अनिवार्य हुँदैन । आवश्यक पनि हुँदैन । छोराछोरीको परिचय आवश्यक नहुने परम्परागत चलन रहेको देखिन्छ ।
रामायण महाकाव्य हो । महाकाव्यका मुख्य पात्रहरूको नाम आएकै छन् । महाकाव्यको कथानकको भूमिकामा जो आवश्यक हुन्छ, त्यहीं मात्र लेखकले राख्छन् । रामायण महाकाव्यको कथानकमा पनि दशरथकी छोरीको भूमिका तथा जनक सीरध्वजको छोराको भूमिका आवश्यक ठानिएन । महाकाव्यभन्दा पनि यथार्थतिर जाँदा यदि जनक सीरध्वजका उत्तराधिकारीको जहाँ चर्चा आउँछ, त्यहाँ राजा जनक सीरध्वजको छोराको नाम आउँछ । दशरथकी छोरीको चर्चा नहुने कारण चाहिं उनी शासक नबन्नु पनि हो ।
जनक सीरध्वजको छोराको नाम भानुमन्त हुन् । भानुमन्तलाई कतैकतै भानुमान पनि भनिएको पाइन्छ । भानुमान सीरध्वजका आफ्नै छोरा हुन् अर्थात् रामका सालो हुन् । सीरध्वजपछिको मिथिलाका जनक अर्थात् राजा यिनै हुन् । यिनी आप्mना पिताजस्तो ऐतिहासिक काम केही गरेको उल्लेख पाइन्न । यस कारण यिनको नाम इतिहासमा त्यति चर्चित भएको देखिन्न । यद्यपि इतिहासले यिनको आलोचना पनि गरेको पाइन्न । तत्कालीन अवस्थामा यिनी पिताको पथलाई पछ्याउने शासक हुन सक्छन्, जसले गर्दा यिनको शासनकाल कुनै दृष्टिले विशेष हुन नसकेको होला । सर्वसाधारणको रुचि त विशेष वा विशिष्ट घटना सम्झिने हुन्छ । विशिष्ट घटनाका सामान्य कुराहरूको खोजी पछिसम्म पनि भइरहन्छ ।
अयोध्याका राजा दशरथलाई सम्राट पनि भनिएको पाइन्छ । राजा दशरथका एक छोरी थिए । छोरीको नाम माथि सुमन कोइरालाले भनेजस्तै शान्त वा शान्ता थियो । एक ठाउँमा शान्तवती पनि भनिएको पाइन्छ । छोरी शान्ताको बिहे गर्नुपूर्व नै सम्भवतः उनले दान दिएका थिए । त्यतिबेलाको चलन यस्तो थियो कि छोरीलाई कुनै ऋषिलाई दिन सकिन्थ्यो । दशरथले आप्mनी छोरी शान्तालाई ऋष्यशृङ्ग ऋषिलाई दान दिएको उल्लेख पाइन्छ । हामी सबैले बुझेका छौं– हिन्दू दर्शनमा दान दिएपछि दानमा दिइएको जमीन, गाईवस्तु, नगद, जिन्सी वस्तुप्रति दाताको सम्बन्ध टुट्छ । दातासित सम्बन्ध छुट्छ । सम्भवतः यसै कारण सर्वसाधारणमा राजा दशरथको छोरीको विषयमा जानकारी कम भएको हुनुपर्छ ।
र, घामभैंm छर्लङ्ग छ– उच्च कुलमा जन्मिएर मात्र नहुने रहेछ । कुनै उच्च कुलको छोरा वा छोरी भएर मात्र नहुने रहेछ । सीरध्वजकी छोरी जानकी अर्थात् सीताको सम्बन्ध तत्कालीन तीन प्रमुख शासकसित हुन पुगेको थियो । जनककी छोरी, दशरथकी बुहारी वा रामकी पत्नी र अर्का विश्वप्रसिद्ध राजा रावणद्वारा अपहरित । तर यत्तिकै कारणले सीताको नाम चलेको होइन । सीताको त्याग, समर्पण, जस्तोसुकै चरम पीडाको अवस्थामा पनि आपूmलाई आप्mनो अडानमा कायम राख्न सक्ने महान् गुण आदिले गर्दा उनी महान् बन्न पुगेकी हुन् । रामायण महाकाव्यमा सामान्यतया रामको आदर्शभन्दा सीताको आदर्शलाई कम मानिएको छैन । कृषियज्ञबाट प्राप्त सीता र आप्mनै कुलमा जन्मिएको भानुमत्तमा प्रसिद्धिको दृष्टिले भानुमत्त सूर्यको अगाडि दीपक पनि बन्न सकेनन् इतिहासको अर्थमा ।
शान्ताको हकमा पनि लागू हुन्छ । मिथिलाको एक छोरीको यति धेरै नाम, प्रशंसा र सम्मान हुन्छ भने मिथिलाको तुलनामा अयोध्या त निकै विशाल थियो । दशरथ त अझ सम्राट पनि थिए । उनकै चार छोराको यति धेरै नाम, मान र चर्चा छ । तर शान्ताको नाम भने खासै कतै आएकै पाइन्न । फेरि स्पष्ट हुन्छ– उच्च कुलमा मात्र जन्मेर नहुने रहेछ ।
रामका दुई छोराहरू कुश र लवले बाल्यकालमा गरेका चमत्कारका कारण तिनीहरूको नाम प्रख्यात छ । तर तिनीहरूले प्रौढ भएर के गरे वा कसरी शासन चलाए भन्ने विषयमा धेरै मानिसले थाहा पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी रामको जन्मको सेरोफेरोलाई लिएर दशरथलाई पनि चिनिने गरिन्छ । दशरथको बाल्यकालको विषयमा धेरैले कुनै चासै राख्दैनन् । यसैगरी सीरध्वज जनकको बाल्यकालको विषयमा पनि कमैलाई थाहा हुनुमा कसैको दोष हुन सक्दैन ।
महाभारतकालको कृष्णका बारेमा कसलाई पो थाहा नहोला तर कृष्णका छोराहरूको बारेमा धेरैलाई थाहा नै छैन । कृष्णको बाल्यकालदेखि जीवनको अन्त्यसम्मका मुख्य घटनाहरू नबुभ्mने हाम्रो समाजमा कमै होलान् । आपूmलाई बारम्बार भगवान् भन्ने तथा आपूmलाई भगवान् साबित गरेका कृष्णका छोराहरूको नाम त्यति प्रख्यात नहुँदा के भन्न सकिन्छ ? कृष्णको छायामा छोराहरू पक्कै परेका होइनन् । इतिहासले कसैलाई उसको कर्मको आधारमा चिन्दछ । त्यसै पनि के भनिन्छ भने इतिहास जहिले पनि विजेताहरूको पक्षमा लेखिन्छ । शक्तिशालीको स्तुतिगान पनि इतिहासले गरेको पाइन्छ । कृष्णको छोराको रूपमा जन्मनेहरूको नाम पनि त्यति चल्न सकेको छैन ।
इतिहासमा यस्ता अनेक घटना पाइन्छन्, जहाँ निकै नाम चलेकाहरूको सन्तान गुमनाम नै रहेका छन् । यस कारण कोही आप्mना पिता निकै ठूलो मान्छे छन् भन्ने घमण्ड नगरे हुन्छ । ठूलो कुलमा जन्मिनु ठूलो कुरो होइन । ठूलो कुलमा जन्मेर मात्र ठूलो मान्छे होइन्न । आप्mनो कर्मचाहिं ठूलो हुनुपर्छ । असल कर्मले मानिसको इतिहास बनाउँछ र आप्mना मातापिताको नाउँ सुरक्षित बनाउँछ ।
आप्mनो स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजको लागि काम गर्नेहरूले आपूmसँगै आप्mना मातापिताको नाम चम्काएका छन् ।
गणिनाथ र गोविन्द पूजा
नेपालका विभिन्न जातजातिले अनेक लोकदेवदेवीलाई कुलदेव वा कुलदेवीको रूपमा पूजा गर्ने गर्दछन् । दक्षिणी नेपालका विभिन्न जातजातिको संस्कृतिसम्बन्धी धेरै कुरा भारतको बिहारका जातजातिसित मेल खान्छ । संस्कृतिका यस्तै मिल्दा अनगिन्ती पक्षमध्ये कुलदेवता पनि एक हो । नेपालका विभिन्न जातजातिले कुलदेवताको रूपमा गणिनाथ–गोविन्दको पूजा गर्ने गरेका छन् । गणिनाथ र गोविन्द भगवान्सित सम्बन्धित अनेक किंवदन्तीहरू प्रचलनमा रहेका छन् ।
गणिनाथलाई भगवान् शिवको मानसपुत्र मानिएको छ । भगवान् शिवको विशेष पूजा भइरहेको थियो । शिवले पार्वतीको पोल्टामा केही अक्षता दिए । त्यसै अक्षताबाट गणिनाथ बालकरूपमा अवतरित भए । शिव र पार्वतीका छोराको रूपमा माया त्यसरी नै पाए जसरी गणेश र कार्तिकेशले पाएका थिए । एकपटक बालक गणिनाथ शिव र पार्वतीसित विष्णुलोक गएका थिए । भगवान् विष्णुले देख्दैमा बुझे– कुनै साधारण बालक नभएर शिवका अवतार छन् । विष्णुले शिवलाई भनेर उक्त बालकलाई आपूmसित राखे । बालकलाई विष्णुले भण्डारपाल नियुक्त गरे ।
एक समय निकै ठूलो अनिकाल प¥यो । विष्णुले गणिनाथलाई आदेश दिए– पृथ्वीलोकमा गएर जनजनको कल्याण गर्नू । विष्णुले यो पनि आदेश दिए– पृथ्वीमा अवतरित भएर उनको पहिलो दृष्टि व्यक्तिमाथि पर्दछ, उनी नै उनका पिता हुनेछन् । गणिनाथ पावन गङ्गाको उत्तरपूर्वमा रहेको महनारमा अवतरित भए र सर्वप्रथम उनको दृष्टि सात्विक भक्त मनसाराममाथि प¥यो, उनी त्यतिबेला सुकेका पातहरू बटुल्दै थिए । गणिनाथ उनकै छोरा बनेर उनीसितै रहन थाले । दैवी गुणले सम्पन्न गणिनाथ आप्mना चामत्कारिक गुणले गर्दा छिट्टै लोकप्रिय बने । एकजना तेली व्यापारीको छोरालाई सर्पले डसेको थियो, बालकको मृत्यु भइसकेको थियो तर आप्mनो दिव्य स्पर्शले बालकलाई गणिनाथले ब्यूँताए ।
पलवैयाका अन्धा राजा धर्म साहलाई आँखाको ज्योति उनकै कारण फर्केको थियो । कालान्तरमा उनको बिहे खेमादेवीसित भएको देखिन्छ । बिहेपछि गणिनाथले आप्mनी पत्नीलाई यो भन्दै बिदा लिए कि केही दिन तिमी माइत जाऊ, म केही आवश्यक काजले बाहिर जाँदैछु । त्यहाँबाट फर्केपछि म बिदा गराएर ल्याउँछु । पत्नी खेमादेवी गह्रुँगो मनले पतिलाई बिदा गरिन् । गणिनाथ गाउँबाट निस्केर जङ्गलतिर लागे । जङ्गलै जङ्गलको बाटो उनी एउटा एकान्त ठाउँमा पुगे । हातमा चिम्टा र कमन्डलु लिएका गणिनाथले पूजाअर्चनाको लागि त्यस ठाउँलाई सफासुग्घर बनाए । केही बेरपछि केही मानिसहरूले एउटा मुर्दा बोकेर ल्याएर त्यहीं राखे । गणिनाथलाई बुभ्mन अप्ठ्यारो भएन कि त्यो ठाउँमा उनलाई आप्mनो तपोभूमि बनाउन सजिलो छैन । त्यो ठाउँ श्मशान हो । जिज्ञासावश उनले मरेका मानिसको बारेमा सोधे । राज्यको जमीनदारको एक्लो छोरो सर्पले टोकेर मरेको थियो । समस्याको गम्भीरतालाई विचार गरेर गणिनाथले मुर्दा लिएर आउने सबैलाई भने– अब यसलाई बाँधेको सबै बन्धन खोलिदिनू, केही बेरमा यो निद्राबाट ब्यूँझदैछ । नभन्दै त्यस्तै भयो । मुर्दालाई बाँधिएको सबै बन्धन खोलेपछि कमन्डलुबाट गणिनाथले गङ्गाजल र झोलाबाट अलिकति खरानी निकालेर युवकमाथि छ्यापे । त्यसको एकैछिनमा युवक उठेर बस्यो । सबैजना आश्चर्यचकित भई गणिनाथको जयगान गरे । दृष्टिविहीन जमीनदारलाई देख्न सक्ने योग्य बनाएपछि उनी पनि खुशी भए । त्यसपछि गणिनाथले जमीनदारसित आश्रम बनाउनलाई जमीनको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । जमीनदारले गङ्गाकिनारमा बाइस एकड जमीन दान दिए । त्यही जमीनमा गणिनाथले आप्mनो आश्रम बनाए । बाह्य सुख र वैभवको त्याग गरेर जमीनदार पनि गणिनाथका परम भक्त भए । जमीनदारलाई कतिपयले राजा पनि भन्दथे । गाउँको राजा वा पालनकर्ता नै आश्रममा आएर बसेकाले गाउँको नाउँ पलवैया राखियो । यो गणिनाथले राखेको नाम हो ।
गणिनाथका दुई छोरा र दुई छोरी थिए । छोराहरूको नाम रायचन्द्र र शिवधर तथा छोरीहरूको नाम सोलमती र शीलमती थिए । पिताको धार्मिक प्रवृत्तिबाट प्रभावित दुवै छोरा र छोरीहरू पनि जपतप र साधना गर्दै समाधि लिएको पाइन्छ ।
गणिनाथको जन्मसित जोडिएको अर्को कथा पनि लोकप्रचलित छ, जुन राम र सीतासँग सम्बन्धित छ । पञ्चवटी प्रवासको समय सीताले एक दिन शनिको व्रत लिएकी थिइन् । खाना पकाउने समस्या भयो । सीताले हातमा एउटा सयपत्री पूmल लिएर इष्टदेवको स्मरण गरिन् । तुरुन्तै त्यो पूmल एउटा सुन्दर युवकको रूपमा परिणत भयो । सयपत्रीलाई बज्जिकामा गेना भनिन्छ । गेनाबाट उत्पन्न भएकोले त्यस युवकको नाम गणिनाथ राखिन् सीताले ।
लङ्का विजयपछि राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्किने बेला गणिनाथले आप्mनोलागि के आदेश रहेको भन्दै इच्छा देखाउँछन् । सीताले नारदलाई बोलाएर गणिनाथलाई सबै किसिमको सहयोग गर्न आदेश दिइन् । साथै गणिनाथलाई पनि सन्तहरूको सङ्गतमा बसेर विभिन्न किसिमका ज्ञान प्राप्त गर्न भन्दै लोकसेवा गर्ने आदेश दिइन् । गणिनाथ नारदसँगै भ्रमण गर्न थाल्छन् । यसै क्रममा एक दिन नारदलाई देवलोक जाने तथा गणिनाथलाई धरतीमैं मानवको भलाइको काम गर्ने आदेश प्राप्त हुन्छ । नारदले बिदा लिंदै गणिनाथसित इन्द्रलोकमैं भेट्ने वाचा गरेर मंसारामलाई धर्मपिता मानेर साथै बस्ने आदेश दिन्छन् । यसपछि गणिनाथ मंसारामको घरमा पुत्रकै रूपमा अवतरित भएर पलवैयाका राजा गणिनाथका अलौकिक सिद्धिबाट खुशी भएर राज्य नै प्रदान गर्छन् । उता मगधका राजा झोटी साहको सपनामा नारदले आप्mनो छोरीको बिहे पलवैयाका गणिनाथसित गर्ने आदेश दिन्छन् ।
केही समयपछि गणिनाथको बिहे झोटी साहकी छोरी खेमारानीसित भयो । केही वर्षपछि योग्य पुत्रको कामनासाथ गणिनाथ र खेमासतीले भगवान् शिवको कठिन साधना गरे । भगवान् शिवको कृपाले उनीहरूलाई दिव्ययुक्त एउटा पुत्र प्राप्ति भयो । बच्चाको नाम गोविन्द राखियो । गोविन्दजीलाई भगवान् कृष्णको अंशावतार मानिएको छ । पछि उनीहरूले दुई छोरा र दुई छोरी पनि पाए ।
अर्को कथा पनि छ । गण्डक नदीको किनारमा कौनहाराघाट पहिले व्यापारिक केन्द्र थियो । त्यहाँ एकजना मंसाराम नामका साधारण वैश्य पनि थिए । उनी सधैं साधुसन्तको सेवामा लागिरहन्थे । उनको घरमा साधुसन्तको सधैं जमघट लागिरहन्थ्यो । उनकै घरमा गणिनाथको जन्म भयो । साधु प्रवृत्तिका बालक गणिनाथ बा¥ह वर्षको उमेरमा साधुको टोलीका साथ घरबाट चारधामको यात्रा गरी फर्के ।
त्यसबेला त्यस क्षेत्रमा भयङ्कर ठूलो अनिकाल प¥यो । गणिनाथले कौनहाराघाटलाई आप्mनो कार्यस्थली बनाएर सर्वसाधारणको भलाइमा जुटे । जनमानसको सेवा गर्दै उनी आप्mनो जीवन व्यतीत गरे ।
यस्ता अनेक कथा पाइन्छन् । लोककल्याणको लागि गणिनाथ पलवैयामा नै अवतरण गरेका थिए । उनी चामत्कारिक सिद्ध पुरुष एवं अद्भुत चरित्रका स्वामी थिए । उनका तीन पुत्रमा गोविन्दलाई भगवान् श्रीकृष्णको अंशावतार मानिन्छ । उनको जीवनसित जोडिएका कथाहरूले उनलाई सिद्ध सन्तको रूपमा मात्र स्थापित गर्दछ । भनिन्छ– जब खेमासतीलाई प्रसवपीडा भयो, तब डगरिन (सुत्केरी गराउने महिला) बोलाइयो तर डगरिन नआइपुग्दै बच्चा जन्मिइसकेका थिए । तेजस्वी बालक जन्मनासाथ आमासित भने– उनलाई डगरिनको आवश्यकता नै छैन । खेमासतीले नवजात शिशुको कुरो ध्यानले सुनिन् । पछि सबैलाई थाहा भयो– गणिनाथको घरमा अद्भुत बालकको जन्म भएको छ ।
कृष्णाष्टमीपछिको पहिलो शनिवारका दिन गोविन्दजी अवतरित भएको मानिन्छ । यसै कारण कृष्णष्टमीपछिको पहिलो शनिवारका दिन गणिनाथ–गोविन्दलाई मान्ने जातिविशेषको लागि पवित्र दिन मानिएको छ । उनी आजीवन ब्रह्मचर्य धर्मको पालन गर्दै जनकल्याणको कार्यमा जुटिरहे ।
किंवदन्तीहरूमा फलको व्यापार गर्ने जातको कुलदेवता कारिखबाबालाई नैना जोगिनले आप्mनो वशमा पारेका थिए । नैना जोगिनको प्रभाव त्यस समय बङ्गाल, आसाम, बिहारमा पैmलिएको थियो । गोविन्दजी आप्mनो तेजबलले नैना जोगिनलाई हराएर कारिखबाबालाई मुक्ति दिलाए ।
गोविन्दजी सिद्ध साधक सन्त मात्रै थिएनन्, अस्त्रशस्त्र पनि ग्रहण गरेका थिए । गोविन्दजी वीरतासित गाँसिएको सबैभन्दा महŒवपूर्ण घटना लाल खाँलाई पराजित गर्नु । लाल खाँ आप्mना तीन साथी सुल्तान खाँ, किस्ती खाँ र बकर खाँसित मिलेर जब पलवैया राजको सीमामा उपद्रो मच्चाउन थाले, तब गोविन्दजीले तीनैजनालाई मारे । लाल खाँ पराजित भएपछि गोविन्दजीको शरणमा आए ।
सिद्ध योगी गणिनाथले सम्पूर्ण भारतको भ्रमण गरे । इतिहासकारहरू उनलाई नाथ योगीको रूपमा स्वीकार गर्दछन् । लोकसंस्कृतिमा पूजा हुने फेकुराम र दयाराम दुवैजना बाबा गणिनाथका सैन्यप्रमुख थिए । पछि गोविन्दजीका सहायक बनेर लोकसेवा गरेको कारण लोकदेवताको मान्यता पाए । गणिनाथका चौध देवानको चर्चा हुन्छ । चौध देवानमा गहिल, वायमतदेवी, फेकुराम, दयाराम, बालापीर, भैरव, हनुमान, विषहर, धर्मराज, साहेब्यास, गोविन्द, सोमनाथ र जालपा सबै लोकदेवता छन् । साहित्यमा गणिनाथलाई नाथ परम्परासित जोडेर हेरिन्छ । गोरखनाथको शिष्यको रूपमा भारतीय साहित्यमा विश्लेषण गरिन्छ । भारत बिहारको वैशाली जिल्लाको महनारमा बाबा गणिनाथ, सती खेमादेवी र गोविन्दजीको भव्य मन्दिर छ । हरेक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमीपछिको पहिलो शनिवार वैशालीको भारतकै विभिन्न ठाउँ र नेपालका साथै अन्य देशमा पनि भव्यताका साथ पूजा गरिन्छ ।
(डा. यशवन्तकुमारद्वारा सम्पादित ‘बज्जिकांचल के सिद्ध संंत’ पुस्तकमा आधृत)
विभिन्न गणना र अनुमानसमेत होला, करिब ५२४५ वर्षपहिले भारतको वर्तमान उत्तर प्रदेशमा कृष्णको जन्म भएको मानिन्छ । कृष्णको जन्म जेलमा भएको थियो । जन्मदेखि नै चमत्कारमाथि चमत्कारको कथा फैलिएका छन् । चामत्कारिक कथाहरूले गर्दा नै कृष्णको प्रसिद्धि फैलिएको छ र फैलिंदै गएको छ अद्यपर्यन्त।
भनिन्छ कृष्ण जन्मने बेलामा जेलका सबै कर्मचारी निदाएका थिए, जेलको ढोका आफैं खुल्यो । जेलबाट उनका पिता वसुदेवले एउटा छैंटीमा हालेर यमुना नदी तर्न खोज्दा बाढी आएको थियो । कृष्णले खुट्टाले पानी छोइदिंदा पानी घट्यो । गोकुलबाट मथुरा पुगे कृष्ण र त्यहाँ जन्मेकी बालिकालाई लिएर वसुदेव फेरि जेल फर्किए ।
कृष्णलाई मार्न तत्कालीन राक्षस र दानव जातिका विभिन्न योद्धाहरू खटाइए तर तिनलाई कृष्णले मारे । बाल्यकालमा दही र खुवा चोरेर खाए । बाल्यकालमा माटो पनि खाए । आमालाई मुख बाएर ब्रह्माण्ड नै आफ्नो मुखभित्र अटाएको देखाए । गाई चराए । विपन्नलाई सहयोग गरे । आवश्यक पर्दा पहाड नै उचाले ।
११ वर्षको उमेरसम्म राधासित नजीक बसे । राधाले मुरलीको प्रशंसा गर्थिन् । कृष्ण र राधाको बालमित्रताको प्रेमको रूपमा यति धेरै विस्तार भयो कि कालान्तरमा कृष्णभन्दा पहिले राधाको नाम आउन थाल्यो । कृष्णका पत्नीहरूको नाम धेरैलाई थाहा नहोला तर कृष्णको नाम राधासित जोडिन्छ । भनिन्छ, दुई दिनमा फर्र्कर आउँछु भनेर राधासित बिदा लिएर मथुरा गएका कृष्ण कहिल्यै फर्केर आएनन् । जीवनको अन्तिम क्षणमा करिब ८० वर्षपछि राधा नै कृष्णलाई भेट्न पुगेकी थिइन्, त्यतिबेला महाभारत युद्ध सकिएको थियो र कृष्ण युद्धको अन्तिम दृश्यबाट विरक्तिएका थिए ।
कृष्णले आपूmलाई बारम्बार भगवान् घोषणा गरिरहे । धेरैका अगाडि भगवान् बनेर प्रस्तुत पनि भए । आवश्यकता अनुसार रूप धारण गरे । भन्छन् कैयौंचोटि विश्वरूपको दर्शन गराए । महाभारत युद्ध शुरु हुनुभन्दा पहिले अर्जुनलाई गीताको उपदेश दिए । अर्जुनलाई उनले भनेका थिए – त्यसभन्दा पहिले सूर्यलाई उनले गीतोपदेश सुनाएका थिए । कृष्णलाई जन्मौंजन्मको कथा सम्झना थियो । कहिल्यै नदेखेका सत्य पनि उद्घाटन गर्दथे उनी । आवश्यक पर्दा सुदर्शन चक्र धारण गरे, सारथि पनि बने ।
जतिखेर द्रोैपदीको वस्त्र दुःशासनले तानिरहेको थियो, द्रौपदीले कृष्णको आह्वान गरेकी थिइन् । यदि साँच्चीकै तिमी भगवान् हौ भने मेरो इज्जत बचाऊ । कृष्ण त्यहाँ थिएनन् तर उनले द्रौपदीको इज्जत बचाए । दुःशासन द्रोपदीको लुगा तान्दातान्दा थकित भएर आफैं बेहोश भएर ढल्यो तर द्रौपदीको लुगा तानेर निर्वस्त्र बनाउन सकेन ।
कृष्णले अद्भूत, अविश्वसनीय र अकल्पनीय कामहरू गरेको उल्लेख पाइन्छ । उनका कतिपय कामहरू उनले नगरेको भएपनि पछि कविहरूले प्रशंसामा लेखिदिएको पनि हुन सक्छ । तर कृष्णको लोकप्रियता वर्तमानसम्म पनि निरन्तर बढिरहेको छ ।
नास्तिकहरू कृष्णलाई भगवान् मान्दैनन् । कतिपयले हरेक मानिसलाई नै भगवान् मान्दछन् । हरेक मानिसमा ईश्वरीय गुण हुन्छ भन्छन् ।
भदौमा जन्मेका कृष्णको जन्म, विश्व हिन्दू समुदायले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक जन्मदिन मनाउँछ । भदौ कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा जन्मेका र वर्ण पनि कालो भएको हुनाले उनको नाउँ कृष्ण रहेको मानिन्छ ।
कृष्णले कर्ममा जोड दिएका छन् । आशावादी विचारका धनी देखिन्छन् । कर्म नगर्नेलाई ईश्वरले पनि हेर्दैनन् यस कारण भनिएको हुन सक्छ । जसले जस्तो कर्म गर्छ उस्तै फल पाउँछ । कर्म भनेको लगानी हो । जसले जति धेरै लगानी गर्छ, उसले उति धेरै ब्याज प्राप्त गर्दछ । भाग्यले कर्मलाई साथ दिन्छ, कर्मले भाग्यको रेखा कोर्छ । कर्म गर्नु हरेकको कर्तव्य हो । कर्मबाट च्युत भएपछि उसको लागि केही पनि बाँकी रहँदैन । कृष्णका कर्मसम्बन्धी उपदेशहरू अत्यन्त काम लाग्नेछन् जीवनमा । उनलाई भगवान् नमाने पनि उनका उपदेश जीवनमा मार्गदर्शक बनाउन सक्छौं ।
मानवसागर हुन सक्दैन यो ठाउँ किनभने सागरमा त प्रवेश मात्र हुन्छ, निकासद्वार हुँदैन । गङ्गामा अनेक नदीहरू मिसिन्छन् र बग्ने भने एकैतिर हो । यो तथ्याङ्क नै होइन तर के मानिन्छ भने नेपालबाट बग्ने नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी पानी गङ्गामैं जान्छ । नेपालको मात्र होइन, उत्तराखण्डको केही भूभागको पानी, उत्तरप्रदेशको अधिकांश भागको पानी, सम्पूर्ण बिहार र अधिकांश झारखण्डको पानी अनि अधिकांश पश्चिम बङ्गालको पानी गङ्गामैं अटाउँछ । गङ्गानदीमा गएर मिसिने नदीहरू आपैंmमा विशाल छन् र गङ्गाले सबै पानीलाई बङ्गालको खाडीमा दुई ठाउँमा लगेर मिसाउँछ ।
त्यसैले मानवको सागर हुन सक्दैन किनभने कुनै पनि ठाउँमा मानिसको प्रवेश हुन्छ र त्यहीं थन्किँदैन । गङ्गाले जसरी पृथ्वीको एउटा ठूलो भूभागको पानीलाई त्यसको गन्तव्यसम्म पु¥याउने काम गर्दछ, देवघरले पनि सोही गरेको छ । देवघर, भारत झारखण्डको एउटा जिल्ला र जिल्ला सदरमुकाम हो । यहाँ साउन महिनामा मानवगङ्गाको संसार रचिन्छ । संसार आपैंmमा विविधतापूर्ण छ । संसारको विविधता कुनै एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न मुश्किल छ । विविधताको आप्mनै आकर्षण हुन्छ तर सबैमा एकरूपताको आनन्द आपैंmमा विशेष हुन्छ । कतैं केही सय विद्यार्थी वा फौजी एकै किसिमको पोसाकमा देखिन्छन् भने त्यो कति राम्रो देखिन्छ । तर यदि कतै सय होइन, हजार पनि होइन लाखौं मानिस एकै पोसाकमा देखिन्छन् भने त्यो दृश्य कस्तो देखिएला ? हो मानव भनेको सबै मानव नै त हुन् नि ? पोसाकमा किन विभेद ? रङ्गमा किन विभेद ? देवघर शहर साउनमा नाङ्गो खुट्टाको शहर बन्दछ । एकै रङ्गको वस्त्रको शहर बन्दछ । एकै बोली ‘बोलबम बोलबम’को शहर बन्दछ । सबै समान देखिन्छन् । कोही ठूलो र कोही सानो देखिंदैनन् तर नजिकबाट हेर्ने हो भने विपन्न र सम्पन्न भने छुट्याउन सकिन्छ । हो, यस्तो अनुभूति हुन्छ कि सबै समान छन् तर सबै समानै हुन्छन् भन्ने होइन । सम्भवतः त्यो एउटा अवसर हो, जहाँ एक महिनामा लगभग एक करोड मानिस एकै पोसाकमा जम्मा हुन्छन् र एकै किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गर्दछन् ।
साउन महिनामा हरेक दिन कमसेकम एक लाख मानिस देवघर शहरमा पस्छन् । आइतवार, सोमवार र पञ्चमी तथा एकादशीको दिन यहाँ हुने भीडको कल्पना हामीले गर्न पनि सक्दैनौं । कसैले भने पनि पत्याउँदैनौं । सिङ्गो शहर एकै किसिमका मानिसले भरिएको हुन्छ । पाइला टेक्न पनि मुस्किल हुन्छ शहरको सडकभरि । गत २० साउन २०७५ का दिन हामी देवघरमा थियौं । देवघरमा शिवमन्दिर छ । यस मन्दिरलाई पुराणहरूमा रावणले पूजा गरेको शिवमन्दिर भनिएको छ । यस तीर्थस्थललाई रावणेश्वर तथा वैद्यनाथ, बैजूनाथ आदि नामले पुकारिन्छ । सर्वसाधारणले बाबाधाम भनेर यसलाई बुभ्mदछन् । झारखण्ड राज्यको प्रमुख तीर्थस्थलको रूपमा रहेको छ । यस तीर्थस्थलमा हरेक साउनमा मेरो पनि पुग्ने प्रयास हुन्छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि हरेक वर्ष निरन्तर पुग्ने गरेको छु, साथीहरूका साथमा । यो वर्ष पनि मध्यरौतहट बहुमुखी क्याम्पस गरुडाका क्याम्पसप्रमुख प्रेमलाल साह, शङ्कर गुदर माध्यमिक विद्यालय समनपुरका प्रधान शिक्षक देवेन्द्र साह, नमूना माध्यमिक विद्यालय गरुडाका अङ्ग्रेजी शिक्षक अनिलकुमार निधि, शिक्षक मदन साह, शिक्षक अजय मण्डल तथा मनोजकुमार यादव र म गरी सातजना थियौं । भारतीय स्कारपियो गाडी भाडामा लिएर गएका थियौं, हरेक वर्षजस्तै । र, हरेक वर्षभैंm बाबाधामलाई माध्यम बनाएर कुनै कतै नयाँ ठाउँ जानुपर्ने लक्ष्य थियो हाम्रो । यसपालिको गन्तव्य छनोट गर्ने मेरो पालो थियो । मैले बाबाधामबाट उत्तरप्रदेशको काशी र अयोध्या पुग्ने लक्ष्य छनोट गरेको थिएँ, जसलाई हाम्रो समूहले सहज स्वीकृति दिएर त्यसैअनुरूप योजना बनाएको थियो ।
करिब डेढ दशकदेखि म बर्सेनि यहाँ पुग्दछु । हामी अहिले सातजना रहेकामा चारजना आधा दशकदेखि सँगै आउँछौं यसैगरी । हरेक साल नयाँ ठाउँ डुल्ने र वर्षको एक हप्ता दैनिक कार्यव्यस्तताभन्दा पृथक किसिमको वातावरणमा बिताउने ध्येय हुन्छ हाम्रो । तर यसपटकजति मानिसको भीड कहिल्यै देखिएन यहाँ । स्थानीयहरू पनि यसपटक मानिसको आगमन देखेर अचम्भित छन् । जता हे¥यो उतै भीड । साँझ परिसकेको छ, सडकभरि मानिसहरू हिंडिरहेका छन् बोलबमको भेषमा । गल्ली, पसल र लजहरू सबै भरिएका छन् । हल्का पानी परिरहेको छ तर सडक भने टेक्नलाई खाली छैन । भीडसँगै बगिनुपर्दछ गङ्गाको पानीजस्तै । अत्यधिक भीडले मानिसको आप्mनो गति छैन हिंडाइको । कोही छिटो पनि हिंड्न सक्दैन, कोही चाहेर पनि ढिलो हिंड्न सक्दैन । खोलामा पानी हुँदा आप्mनो गति हुन्छ तर गङ्गामा पुगेपछि सबैको गति उही हुन पुग्दछ ।
शहरमा पुग्नुभन्दा तीन किलोमिटर पहिले एक नम्बर र दुई नम्बर बसपार्क निर्माण गरिएका छन् अस्थायी । आँखामा अटाउन्जेल गाडीको लस्कर देखिन्छन् । यात्रुहरू कोही गाडीमैं सुतेका छन् त कोही गाडी निकालेर देवघरभन्दा बाहिर गइरहेका छन् बासको खोजीमा । सामान्यतया सबै बाहिरिया गाडीलाई देवघर शहरमा प्रवेश निषेध छ । कतैबाट पनि बोलबमको भेषमा रहेका कुनै पनि गाडीले देवघर शहरको अनुहार हेर्न भने पाउँदैन । सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा छ । ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त । सम्हाल्नै नसकिने ।
एक नम्बर बसपार्कको छेउमैं ठूलो पण्डाल बनाइएको छ । यात्रुहरूलाई आराम गर्न निर्माण गरिएको यस पण्डालको विशालता अवर्णनीय छ । हेर्दा दश बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा पैmलिएको देखिन्छ । झन्डै दशदेखि बीस हजार खटियाहरू राखिएका छन् । जमीनको सतहभरि बाक्लो प्लाइवुड बिछ्याइएको छ । प्लाइवुडमाथि हरियो महँगो कार्पेट बिछ्याइएको छ । त्यसमाथि फलामे खटियाहरू राखिएका छन् । दशदेखि बीस हजार बोलबम आरामले सुत्न सक्छन् । पर्याप्त पङ्खा झुन्ड्याएका छन् । मोबाइल चार्ज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खटियामाथि जति मानिस सुत्न सक्छन्, त्यसभन्दा दोब्बरभन्दा बढी मानिस भुइँमैं सुत्न सक्छन् । एकचोटिमा सयौंजना शौचालय जाने, सयौंजना स्नान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ । सिसिटिभीले निरन्तर कडा निगरानी भइरहेको छ । कतै कुनै कुनामा भीड बढ्यो वा दुई/चार जना केहीबेर उभिए वा निरीक्षणकर्तालाई कुनै शङ्का लागेमा माइकद्वारा तत्काल सतर्क गराइन्छ । सुरक्षाकर्मी तत्काल पुग्छ । देखेर अचम्भित र विस्मित मात्र हुने होइन, सुविधा उपभोग पनि गर्नु बाध्यता छ किनभने हामी गाडीनेर फर्केर आउँदा रात छिप्पिइसकेको हुन्छ । गाडी तत्काल निकाल्न सकिंदैन । निकालेर पनि कहाँ गएर लज खोज्ने । शहरमा पस्न सकिंदैन । लगभग निरुपाय हुन्छौं ।
हो, यसलाई मानवसागर भन्न सकिन्छ अल्पकालको लागि । पण्डालबाट कोही बाहिर निस्किेको देखिंदैन अहिले । मानिसहरू पसिरहेका छन् र कतै कुनै कुनातिर गएर सुतिरहेका छन्– खाटमा, भुइँमा । कति हजार मानिस सुतेका छन् वा बसेका छन्–गन्ने सामथ्र्य आपूmमा छैन । विस्फारित आँखा र अकल्पनीय अनुमानले द्रवित हुन्छौं मात्र । हामीमध्ये तीनजना एसी चलाएर गाडीमैं सुत्छन् तर चारजना भने यहीं सुविधा उपयोग गर्दछौं । धन्य त्यहाँको सरकारले गरेको व्यवस्था र व्यवस्थापन कुनै आश्चर्यभन्दा कम छैन ।
निदाउनुपूर्व हामी छलफल गर्छौं– देवघरमा आजको रात घटीमा पाँच लाख आगन्तुक हुनुपर्छ हामीजस्ता । हामीजस्ता नेपालीको सङ्ख्या पनि हजारौंमा हुनुपर्छ ।
आफ्नै सुखका लागि
आपूm सुखमा रहन सबै चाहन्छन् । यो सम्पूर्ण जीवकै लक्षण हो । जीव मात्रले सुखको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो तर सबै जीवले आप्mनो र नितान्त आप्mनो मात्र स्वार्थ वा सुख हेर्छ भन्ने होइन । आप्mनो, आफन्तको र आप्mनो सन्तानको सुख हेर्न चाहने धेरै जीव छन् । बच्चा जन्माउने वा अन्डाबाट बच्चा कोरल्ने सबै प्राणीले आप्mनो सन्तानलाई माया गरेको देखिन्छ । सन्तानलाई माया गरेर आप्mनो केही स्वार्थ त्याग गर्नुलाई पनि सकारात्मकरूपमा लिन सकिन्छ । नितान्त आप्mनो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्दै जानेक्रमलाई सबैतिर प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ ।
धेरैले के भन्ने गरेका छन् भने जो मानिस आपूm र नितान्त आपूm मात्र सुखमा रहने र आप्mनै सुखको खोजी निरन्तर गर्दछन्, त्यस्ता मानिसले वास्तविक सुखको खोजी गर्न सक्दैनन् । नितान्त आप्mनो सुख खोज्ने मानिस स्वार्थी हो । स्वार्थीले आपूmलाई मात्र हेर्दछ । स्वार्थीको स्वार्थ कर्मको सीमा हुँदैन ।
आप्mनो स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेकाहरूले के भन्ने गर्दछन् भने अरूको लागि जति धेरै काम गर्न सकिन्छ, उति धेरै बढी सुख प्राप्त हुन्छ । आप्mनो स्वार्थको लागि काम गर्दा खुशी त हुन्छ नै, आप्mनो लागि कुनै सफलता प्राप्त हुँदा एक्लो खुशी हुनुपर्ने हुन्छ भने आप्mनो नातागोताभन्दा अलि टाढा, आपूmले पहिलेदेखि सहयोग गर्दै आएको र आपूmले सङ्कटमा परेकोलाई भित्री मनमा कुनै सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको अवस्थामा उसले सफलता पाउँदा साँच्चिकै निकै खुशी लाग्छ ।
भन्न खोजिएको के भने, नितान्त आप्mनोलागि कुनै खुशी आउँदा आपूmलाई खुशी लाग्दछ तर आप्mनो स्वार्थभन्दा टाढा रहेको कुनै व्यक्तिले सफलता पाउँदा अभ्यन्तरमा लाग्ने खुशी आप्mनोभन्दा बढी आनन्ददायी हुन्छ ।
जसले अरूको सुखको लागि काम गर्दछ । जसले आप्mनो स्वार्थमा धक्का नपुग्ने गरी अरूको फाइदाको लागि काम गर्दछ, उसले आप्mनो सुखको भन्दा अझ बढी सुख प्राप्त गर्दछन् । यही कारणले नितान्त आप्mनो व्यक्तिगत वा पारिवारिक सुखको भन्दा अरूको सुखको लागि, स्वार्थको लागि काम गर्दछ भने उसले सबैभन्दा बढी सुख प्राप्त गर्दछ ।
वास्तवमा निरन्तर सुखको खोजी गर्नेहरूले जहिले पनि अध्यात्मतिर आकर्षित भएको पाइन्छ । अध्यात्मले आत्मिक सुख प्राप्त हुन्छ तर यहाँ आध्यात्मिक सुखको चर्चा गर्न खोजिएको होइन । गीतामा परमार्थको चर्चा गरिएको छ । परमार्थको भावनाले मानिसलाई अत्यधिक सुखको यात्रा तय गर्दछ । हो, अत्यधिक सुखको खोजी गर्नेहरूले आप्mनो स्वार्थलाई मात्र परित्याग गर्नुपर्दछ ।
आपूmलाई स्वार्थभन्दा माथि उठाउनु चानचुने कुरा होइन । यो कर्मयोग पनि हो । मनमा दृढ सङ्कल्प नहुँदासम्म आप्mनो स्वार्थको परित्याग गर्न सकिन्न । आप्mनो स्वार्थको परित्याग नगरेसम्म कोही कसैले वास्तविक सुखको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । व्यक्तिगत सुख वास्तवमा सुख होइन । स्वार्थीहरू त अरूलाई दुःखी बनाएर, अरूलाई दुःख दिएर पनि नक्कली सुख प्राप्त गर्दछन् । नक्कली सुखमा रमाउनेहरू सुखी हुन सक्दैनन् । वास्तविक वा सक्कली सुख अरूलाई दुःखी नबनाईकन आपूm सुखी हुन्छन् र अझ एक कदम अगाडि बढेर र आपूmलाई बिर्सेर अरूको सुखको लागि काम गर्दछन् । अरूको सुखमा आपूmलाई सुखी ठान्दछन् । अरूलाई सुख बनाएर आप्mनो नाम र यश अन्यत्र पैmलाउँछन् । आप्mनो नाम र यशको सुख सबैले प्राप्त गर्न सक्दैनन् । नाम र यशको प्राप्तिको लागि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठ्नै पर्दछ । जति धेरै आप्mनो सुखको त्याग गर्न सक्यो, जति धेरै आप्mनो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्यो, उति धेरै सुखको प्राप्ति हुन्छ । आप्mनो कारणले जब अरूले सुख पाउँछन्, तब हुने सुख वास्तविक सुख हुन्छ ।
साधारण मानिसले आप्mनो सुखको खोजी आप्mनो वरपर मात्र खोज्दछ तर आप्mनै सुखको लागि काम गरिरहँदा आप्mनै सुखको बाटो बिराएको पनि हुन्छ । सदैव आप्mनो सुखको बाटो खोज्दा दुःखको बाटोमा हिंडेको पत्तै हुन्न । आप्mनो सुखको लागि अरूलाई दुःख दिनेहरूले दुःख पाइरहन्छन् । यस कारण आप्mनै सुखको लागि अरूलाई सुखी र खुशी बनाउनु आवश्यक छ । हामीले आपूmले काम गर्दा अरूलाई दुःख दिएर वा अरूलाई मर्का पर्ने गरी गर्नुभन्दा वास्तवमा अरूलाई फाइदा पुग्ने गरी ग¥यौं भने त्यसबाट सुख प्राप्त हुन्छ । वास्तवमा आप्mनै सुखका लागि मानिसले अरूलाई खुशी बनाउने केही कामहरू गर्नु राम्रो हुन्छ । यस कारण वास्तविक सुखको खोजीमा रहनेहरूले आप्mनो सुखको उपभोगको साटो अरूको सुखको बाटो पनि हेर्नुपर्दछ । सुख कतै खोजेर पाइने कुरो होइन, यो त भित्री मनमा उब्जने कुरो हो । अरूलाई दुःखी बनाएर आप्mनो मनमा यदि सुख लाग्छ भने ऊ वास्तविक सुखी होइन । यसर्थ हरेकले प्राप्त गर्ने सुखको लागि जति धेरैजनालाई सकिन्छ उति धेरैजनाको बीचमा सुख बाँड्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । आप्mनो स्वार्थमा पनि सुखको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरालाई मानेर आप्mनो कारणले अरूले खुशी पाउँदा त्यसमा अझ बढी सुखी हुनुपर्दछ ।
कृष्णको नाम जहिले पनि राधासित जोडिन्छ । राधा कृष्णको बाल्यकालको साथी थिइन् । ११ वर्षको उमेरमा राधासित दुई दिनपछि फर्केर आउँछु भनेर गएका कृष्ण कहिल्यै फर्केर आएनन् । ८० वर्षपछि झन्डै ९१ वर्षको उमेरमा कृष्ण भएकै ठाउँमा राधा पुगेकी थिइन् । त्यतिखेर महाभारत युद्ध सिद्धिसकेको थियो । महाभारत युद्ध सकिएको केही समयपछि युद्धभूमिको भयङ्कर अवस्थालाई देखेर कृष्ण विह्वल र विक्षिप्त बनेका थिए ।
कृष्णलाई राधाले भेटेपछि त्यहीं प्राणत्याग गरेकी थिइन् । सामान्य वार्तालाप भएको थियो, दुई बीच । दुवैले जीवनको त्यो घडीमा आप्mना बाल्यकाललाई सम्झेका थिए । दुवैले सुन्दर बाल्यकाललाई सम्झेर एकार्कालाई नदेखाउने गरी अश्रुधार चुहाएका थिए । दुवैले रोएको दुवैले थाहा पाइसकेका थिए । आँखा देख्न नसक्ने भइसकेकी राधाले कृष्णको सबै कुरा देखिरहेकी थिइन् । राधाको देहत्यागले कृष्ण झन् असह्य वेदनाले छटपटिएका थिए ।
आप्mनो युगका नायक कृष्ण थिए । उनको नायकत्वलाई वर्तमान युगले पनि स्वीकार गरेको छ भने तत्कालीन विश्वले प्रेम र भय दुवै कारणले स्वीकार गरेको थियो । सबै किसिमका दुःख र सबै किसिमका सुखभोग गरेका कृष्णले राधालाई कहिल्यै बिर्सेनन् ।
कृष्णको बिहे कुन्डिनपुरकी राजकुमारी रुक्मिणीसित भएको थियो । रुक्मिणीका पिता, माता र सबै दाजुभाइसहित रुक्मिणीको विवाह कृष्णसित गर्ने कुरामा सम्मति थियो तर रुक्मिणीका ठूल्दाजु रुक्मीले रुक्मिणीको विवाह कृष्णका फुपूका छोरा शिशुपालसित गराउन चाहन्थे । शिशुपालसितै विवाह गर्ने तय पनि भयो तर रुक्मिणीले एकजना ब्राह्मणको हातबाट कृष्णलाई पत्र पठाएर बोलाइन् । रुक्मिणी गौरीपूजन गरेर फर्किरहेको समयमा कृष्णले अपहरण गरेका थिए । अपहरणमा रुक्मिणीको पनि साथ र सहयोग थियो ।
कृष्णका धेरै पत्नी थिए । रुक्मिणी र सत्यभामाको नाम धेरै आउँछ । सत्यभामाकै सहायताले कृष्णले नरकासुरको वध गरेका थिए । सत्यभामालाई निकै भ्रम थियो कि कृष्णले सबैभन्दा बढी मलाई प्रेम गर्दछन् तर कृष्ण सबै पत्नीलाई समान प्रेम गर्दथे ।
रुक्मिणीको कोखबाट कृष्णका दश पुत्र र एक पुत्री जन्मेका थिए । प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, सुषेण, चारुगुप्त, चारु, चारुबाहु, चारुबिंद, भद्रचारु र चारुक कृष्ण–रुक्मिणीका पुत्रहरू हुन् ।
कृष्ण–रुक्मिणीका एक पुत्री थिइन्, चारुवती ।
कुनै सूर्यवंशीकी पुत्री कालिंदी, अवन्तीराजकी कन्या मित्रविंदा, अवधपति नग्नजितकी पुत्री सत्या, जाम्बवानकी पुत्री जाम्बवती, केकयराजका दुई छोरीहरू भद्रा र रोहिणी, मद्रराजकी कन्या सुशीला, सत्राजितकी पुत्री सत्यभामा र शैब्यराजकी पुत्री लक्ष्मणा कृष्णका अन्य पत्नीहरू हुन् ।
कृष्णका अन्य पत्नीहरूबाट जन्मेका सन्तानको विषयमा उति धेरै चर्चा भएको पाइन्न । तर सबै पत्नीबाट सन्तानोत्पत्ति भएको उल्लेख भने पाइन्छ ।
कृष्णका पुत्रहरूमा प्रद्युम्न, साम्ब, सट, सारण र गद निकै प्रसिद्ध भए । कृष्णका नातिहरूमा अनिरुद्ध र वज्रको प्रसिद्धिको चर्चा पाइन्छ ।
कोही किन रिस उठ्दो लाग्छ ?
मनोविज्ञानको औपचारिक अध्ययन हुन थालेको पनि झन्डै शताब्दी हुन लागेको छ । यसको अर्थ मनोविज्ञानको अध्ययन पहिले हुँदैनथ्यो भन्ने होइन । मनोविज्ञानको सम्बन्ध रामायण, महाभारत तथा गीताजस्ता पुरातन ग्रन्थमा पनि कुनै न कुनै रूपमा भएको देखिन्छ ।
केही वर्ष पहिले के एउटा तथ्य आएको थियो भने वनस्पतिको पनि मनोविज्ञान हुन्छ । कुनै निश्चित वनस्पतिलाई सुमधुर लाग्ने सङ्गीत वा गीत निरन्तर सुनाइयो भने त्यस वनस्पतिको विकास राम्रो भएको भनिएको थियो । पशुसित राम्रो व्यवहार गर्दा पशुले राम्रो व्यवहार गरेको हामीले देखेकै छौं । कोही मानिस हिंस्रक पशुलाई पनि उसको मनोविज्ञान बुझेर माया गर्दा मानिससित पनि निकै लहसिएको देखिन्छ । यसबाट मनोविज्ञानको उपयोग पुरातन समाजदेखि नै भइरहेको देखिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
मनोविज्ञानको अध्ययनमा त यहाँसम्म पनि भन्ने गरिन्छ कि मानिसको हरेक कार्यव्यापारमा मनोविज्ञानको प्रभाव परेको हुन्छ । मनोविज्ञानले मानिसको काम र व्यवहारलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । साथै यो पनि देखिन्छ कि मानिसले बाहिर एकथोक र भित्र अर्कोथोक पनि गरिरहेको हुन्छ । बाहिर उसले देखाउन खोजेको र भित्रबाट उसले देखाइरहेको दुवै बुभ्mने उसको अनुहार हेरेर बुभ्mदछन् ।
तर बिल्कुलै बिरानो ठाउँ जहाँ आप्mनो आफन्त कोही छैन, आपूmले चिनेको कोही छैन, आपूmलाई चिन्ने कोही छैन, सम्पूर्ण ठाउँ र वातावरण नै नयाँ छ । आपूm त्यो ठाउँमा पहिलोपटक पुगिएको छ । त्यो ठाउँमा पनि कोही किन आप्mनो र कोही किन आपूmलाई अत्यन्तै नराम्रो लाग्ने गर्दछ । किन कोहीलाई देख्नेबित्तिकै आप्mनोजस्तो लाग्छ ? बोली हालूँजस्तो लाग्छ ? कसैलाई देख्नेबित्तिकै मनभित्र यस्तो आकर्षण उत्पन्न हुन्छ कि त्यो मानिस आप्mनोजस्तै अनुभूत हुन्छ । किन कोही मानिसले आपूmतिर हेर्दा नै आप्mनो मानिसले हेरेको आँखाजस्तो लाग्छ ? यसको विपरीत अवस्था पनि देखिन्छ कहिलेकाहीं त्यहीं बिरानो ठाउँमा । बिरानो ठाउँमा कसैको अनुहार देख्नेबित्तिकै रिस उठेकोजस्तो अनुभूति भएकोजस्तो हुन्छ ? कोही किन बिरानो ठाउँमा पनि रिस उठ्दो मानिसको रूपमा आपूmलाई लागेको हुन्छ । आप्mनो साथीलाई पनि कोही आप्mनोजस्तो लाग्छ ? अझ व्यवहारमा पनि के देखिन्छ भने कोही कसैले सहयोग गर्न खोज्दछ र कोही कसैले असहयोग गर्न चाहन्छ । कसैले भनेको कुरामा विश्वास लाग्छ र कसैले भनेको कुरा विश्वासयोग्य लाग्दैन ।
बिरानो ठाउँमा पनि कहिलेकाहीं कोही इमानदारद्वारा पनि सताइएको पाइन्छ भने गैरभलादमीले पनि कहिलेकाहीं अरूको पत्यारबिना सहयोग गरेको हुन्छ । किन कसैले सहयोग गर्दा पनि आपूmलाई उसको सहयोग स्वीकार्न मन लाग्दैन ? किन कसैले सहयोग गरिदिएजस्तो आप्mनो भित्री मनमा लागेको हुन्छ ।
यस प्रकारको प्रश्नको उत्तर सामान्य जीवनको साधारण सोचाइभन्दा माथि हुन्छ । यो मनोविज्ञानसित मात्र सम्बन्धित हुन सक्छ । हामीले आप्mनो मनोविज्ञान अनुसार नै सोचाइ बनाएका हुन्छौं । अन्यत्रको ठाउँ अर्थात् परिवेशले पनि मानिसलाई उस्तै बनाएको हुन्छ । परिवेशले मानिसको मनोविज्ञानमा प्रभाव पारेको हुन्छ । मानिसको मनोविज्ञानलाई उसको वंशानुगत गुण तथा साथीभाइको सङ्गत र उसको अध्ययन तथा अन्य परिवेशले पनि काम गरेको हुन्छ । मनोविज्ञानका अनेक पक्षहरू हुन्छन् । तत्कालीन परिवेशले पनि मानिसको मनोविज्ञानलाई प्रभावित पारेको हुन्छ । तर अनजान ठाउँमा पुगेको समयमा केही आफन्त वा कोही रिस उठ्दो लाग्ने विषयमा सम्भवतः मनोविज्ञानले अभैm अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको छ कि ? मनोविज्ञानको यो नयाँ शाखाले एक दिन यसको अध्ययनको ढोका खोल्ने नै छ । अध्यात्मले यसको उत्तर त दिएको छ तर मनोविज्ञान वा विज्ञानले यस विषयमा अभैm अध्ययन गर्न बाँकी रहेको छ कि ?